Wakaneta nemafungire eCanonical uye vamwe vashandisi veUbuntu | Kubva kuLinux
Wakaneta nemafungire eCanonical uye vamwe vashandisi veUbuntu
pandev92 | | Zvimwe
Ndaneta nemafungire eUbuntu uye nevamwe vashandisi veiyi distro, takananga kune izvo OpenSource iri uye nekwavanobva kwavari kuyamwa kwemakore mazhinji.
Munguva pfupi yapfuura sevazhinji venyu munoziva, Ubuntu yakafunga kugadzira yavo yakajeka graphical server, inonzi Mir, mune chii chiri kick mune crotch kune vanogadzira Wayland, hongu Wayland, iyo server iyo yavainge vachitaura, kubvira Ubuntu 10.04, iyo ivo vaishandisa.
Mukupedzisira zvakaonekwa kuti Ubuntu yanga ichigadzira yavo yakajeka girafu kubva 2012, kuseri kwenharaunda. Zvakanaka, ini handisi kuzosimbisa kuti zvakashata sei kutora munhu wese kumapenzi uye kushayikwa kweCanonical kwekujekesa, asi pamusoro pezvose ndinoda kuzvisimbisa pachangu kuti nei zvakaitwa na Ubuntu zvinotyisa, zvirinani nenzira dzayo.
Iyo graphic server chidimbu chakakosha, Xorg yave yechinyakare uye zvakare zvinonetsa kuisa zvimwe zvinhu kwazviri, nekuti hazvina kumbofungidzirwa kuti ndezvipi zvinodiwa nhasi. Iko kushandiswa kweiyo graphic server kana imwe, zvinogona kureva zviri nyore uye zvakapusa, kuti imwe yasara isina kana rutsigiro kubva kune vagadziri, ichizviisa kune yakapusa rutsigiro rwevatyairi vemahara, izvo kana iri Intel kana AMD, zvichiri kugamuchirwa. asi mune iyo NVidia….
Iko pano, iko Canonical, kune yakapusa chokwadi chekuva neprojekti kwainogona kushandisa yakazara uye yakakwana kutonga, iyo hudzvanyiriri, inosarudza kugadzira imwe graphic server, ichigadzira kupatsanurana mupanorama (uye ichifunga kuti vashandisi vayo ndivo vanonyunyuta zvakanyanya nezve izvo zvakatora distros), iyo, isina kana chinhu iyo Wayland isati yatove nayo.
Iko kutengesa kwave kwatove kuitwa, kutendeuka kwaro kunharaunda yese, ivo vanogadzira GNOME, KDE, nedzimwe nharaunda dzaive dzichitoshanda kutora nzira yeWayland. Muenzaniso wakajeka ndewokuti GNOME 3.10 (Gunyana 2013?) Inenge yatove nerutsigiro rukuru kune Wayland.
Iyo nharaunda, seyakajairika sezvazviri, inobhururuka, vanhu vazhinji vari kushandira mahara pane chirongwa, uye pakati nepakati nekushanda, mumwe munhu anobuda kuzokuudza kuti basa rako harisisina kukosha chero chinhu, vangatarise kumeso kupi?
Aya ndiwo maitiro evanogadzira vakaita kwin kuratidza zvinhu zvakaita se:
Ndisati ndapinda mune zvakadzama ini ndoda kujekesa chinhu chimwe: Canonical inobvumidzwa zvachose kugadzira chero chavanoda. Ini ndakanyatsogadzikana neizvi uye handina basa kuti vagadzire imwe yekuratidzira server, yega os kernel kana imwezve desktop desktop. Ini ndaisagona kutarisira zvishoma. Imari yeCanonical / yaMark uye anogona kuiisa munzira ipi neipi yaanoona seinobatsira. Ndingadai ndisina kana hanya kana chingave chemba software, izvo zvese zvakanaka.
Izvo zvisina kunaka zviri kukonzera kukanganisika kukuru mune yemahara software ecosystem nekupa manyepo ehunyanzvi nharo uye kuita zvivindi zvine hungwaru nezve software Canonical haibatsiri. Izvi hazvigamuchirwe. Izvi zvaishungurudza uye zvakaparadza kuvimba kwandaive nako muCanonical. Zvichava zvakaoma kuvaka zvakare kuvimba uku. Canonical inogona kufara kuti ndiyo yemahara software yenyika uye kwete yakajairika kambani yenyika. Paive nezvimwe zvirevo zvaigona kunge zvakasimudza dhipatimendi repamutemo mune yakajairika kambani yenyika . Izvo zvakare zvinodhura yakawanda yekukurudzira kanenge parutivi rwangu uye ini ndakatobvunza kana zvichiri kukosha kuve nhengo yemahara software software ecosystem. Panzvimbo pekushanda pamwechete isu tave nemamiriro ezvinhu apo nhengo dzeiyo ecosystem dzinova mukwikwidzi uye ndeipi badmouth chikamu cheiyo software stack. Mamiriro ezvinhu anoshungurudza.
Iko zvirokwazvo kune zvikonzero zvine musoro zvekuvandudza Mir izvo zvine musoro zvakare. Nehurombo ivo havasati vaunzwa kusvika parizvino. Ndine chokwadi chekuti ndinoziva zvikonzero uye dai zvaizotaurwa pakarepo zvaizove kwandiri nemamwe mapurojekiti angangove ari nyore. Zvinenge zvakabvisa kushushikana uko chiziviso chakakonzeresa uye isu taisazoda kuzvikurukura zvachose, nekuti iwo mamaki emubvunzo aisazovapo. Asi zviri pachena kuti Canonical yakasarudza kupa nhema mapoinzi ehunyanzvi pane chaiwo.
Zvakajairika kuti vagadziri vabatwe, unogona here kufungidzira nyika, ipo nharaunda chete inokwanisa kumhanyisa Mir iri Kubatana, uye nevamwe vese vasingade kana kufanana neUbatanidzwa, vasingakwanise kushandisa nharaunda ine yakavharwa driver driver?
Asi ngatiendei mberi, ngatione hupengo, hunogona kumisa kumhanya KDE paMir:
Mir haina protocol chaiyo. "Musimboti wemukati" unotsanangurwa se "protocol-agnostic". Izvi zvinopa dambudziko kwatiri kana isu tichizoda kuishandisa. Maumbirwo edu akasiyana (sezvakatsanangurwa pamusoro) uye tinoda protocol pakati pekombiki yedhizaizi nemunyori. Kana Mir ikasapa kuti isu tingazoda kushandisa yedu yega protocol. Uye izvo zvatove zviripo, inonzi "Wayland". Saka kunyangwe dai taizotsigira Mir, isu taizoda iyo Wayland protocol?!? Izvo hazvina musoro kwandiri. Kana isu tichida kumhanya Wayland pamusoro peMir kungowana maficha atinoda, nei tichifanira kumhanya Mir zvachose?
Kugadzira nharaunda senge KDE inoshanda, paMir, Wayland yaizoramba ichidikanwa, chimwe chinhu chisina musoro, saka saka, zvaive nani kushandisa Wayland chete, handiti?
Iye zvino, zvakanaka, Canonical ichiri munzira yako, iyo inogona kukuitira zvakanaka kana zvisina kunaka iwe. Semuenzaniso, ini ndoda kurangarira kuti nhasi, Canonical haisi solvent kambani, uye haina kutonga mumusika wemakambani makuru nemaseva, uko Red Hat inowanzo kutonga, saka pakupedzisira, sarudzo iyo distros seRed Hat kana Suse inoita , Inoburitsa chiyero neimwe nzira kana imwe.
Dambudziko rinouya, kana iwe ukapedza maawa nemaawa, uchiverenga zvirevo kubva kuvashandisi veUbuntu, pamapeji akaita sePhoronix, iwe unowana zvirevo zvakaita seizvi:
Kwete, kwete kwete… Haugoni kuzviwana. HAPANA munhu ari kumubvunza kuti atsigire MIR. Kwin haina basa neCanonical, uye ndizvozvo. HAPANA munhu ari kubvunza maonero ake nezve izvo Canonical iri kuita neMIR uye Kubatana. Iko hakuna prototi yemamwe madhesiki nekuti hapana chikonzero. Akatotaura kare kuti haafarire MIR, uye nechikonzero chakanaka kubvira kwin haina basa.
Canonical yakafunga, uye chinhu chakanaka mumaonero angu, kuti ivo havagone kuvimba nevechitatu mapato ekumusoro mapurojekiti asingape shiti nezve chero chinhu kunze kwemapurojekiti avo, semuenzaniso, gnome shell uye kde. Wayland, gnome uye kde hazvisangane nezvinangwa zvavo, nei zvakafanira kuvatevera? izvozvo hazvina musoro.
Uyezve, ini ndinofunga kuti canonical inofanirwa kukanganwa nezve kde uye gnome kune zvakanaka, uye neimwe nzira vazviswededze kure zvakanyanya kubva kune yekare chikoro linux distro paradigm iyo inosanganisira kurongedza zvakasununguka zvine hukama, zvisina hukama kana kunyange zvinopesana zvinokwira kumusoro
Uyu anovandudza anofanira kuisa pfungwa dzake pakuita, kuenderana kwemahara uye mashandisirwo ezve zviwanikwa, chimwe chinhu chaakaratidza hachisi kufarira kwazvo. Akafunga kuenda kune waylaid, zvakanaka, kutanga kushanda pane izvo, KWIn ichave isingakoshe zvakadaro.
Ndichiona izvi, ini ndinogona kungoti, rarama hupenyu hwakareba OpenSource, rarama kwenguva refu, mafungiro api ..., ndinofunga kuti vamwe vashandisi vakawana isiriyo sisitimu yekushandisa, vamwe vanoita kunge vashandisi veMac OS X, uye kwete GNU / Linux.
Uye kana ini ndikashandisa GNU / Linux nhasi uye kwete OS X pane yangu pc, zvinongova zverusununguko rwekukwanisa kushandisa chero distro yandinoda, nerutsigiro kubva kuNvidia, uye ndisingafanire kutevedzera dzidziso yemumwe munhu kunyanya. Nekuti kuvimba nemunhu mumwe chete, ini zvirinani kushandisa OS X, izvo zvirinani izvo zvavanoita, kunyangwe nzira dzingave dzinopokana, vanozviita nemazvo.
Zvisinei, murazvo unoshumirwa. Asi kana ini ndikasiiwa nechimwe chinhu, ndechekuti munhu wese akasununguka kuita zvavanoda, asi musimboti weGNU / Linux unofanirwa kunge wakaenzana kune wese munhu, uye kwete kuyedza kukonzeresa rakakura uye rinorwadza kupesana. Iyi haisi Windows, iyi haizombove Apple, nekuti zvakawanda zvekuzvivaraidza zvekumisikidza chimwe chinhu kune vamwe, apo nharaunda iyi yagara ichizvizivisa parusununguko nekugovana zvinhu nemunhu wese?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Wakaneta nemafungire eCanonical uye vamwe vashandisi veUbuntu
Ndeapi "blowjobs" anogona kuverengwa pano nguva nenguva, handiti?
Pindura kuna Fitoschido
Kufanana neaya aunoita nguva nenguva?
Nezve ruzivo rwako, mumashoko angu asinganzwisisike pamusoro apa ini ndangoshandisa rimwe remazwi akanakisa akaunganidzwa neiyi blog isinganzwisisike. Zvino, nekutenda kumhinduro yako, ndinoziva kuti uri munhu akaita sei, uye nokudaro ndinogona kupfuudza pfungwa yako - pamwe neiya yemunyori wekupinda - kuburikidza nechikwata chekukunda, nekuti ini handina hanya nevanhuwo zvavo. of shoddy. Kwaziso.
Kuteerera uku kunofanirwa kuongororwa: /
Izvi ndizvo zvinoitika kana vanhu vachitya kuti kugoverwa kweLinux kwavanoshandisa kunogona kusara vasina mutsigiro wevatyairi vemidziyo yavo yakavharwa. Nekudaro, ivo havazokwanise kushandisa yavo isina waya kadhi kuisa yavo Facebook kusora chinhu ivo vachishandisa Google kutsvaga paInternet pane izvo zvavakatumirwa kuti vaongorore uye kuti ivo chaizvo chaizvo havazonongedze sekunge zvikaitika kwavari nekuda kwe Mweya Mutsvene. Pasina kutaura kuisa madhiraivha eNVIDIA kutamba paStam. 🙂
PS: Zvese zviitiko uye mavara akataurwa pano ndeenhema uye haana kuitirwa kuti agumbure chero munhu. Facebook, Google, NVIDIA, uye Steam zviratidzo zvevatenzi vazvo.
Pindura kuna Alejanjim
satan AG akadaro
Wuao, iyo nyaya iri kupisa, nguva nenguva, isu tinofanirwa kumirira kuti tione zvinoitika.
Pindura kuna satanAG
Ini ndinofunga kuti mukana wakavhurika, kupatsanurwa uko GNU / Linux inotambura hakusi kwehunyanzvi chete asi huzivi, kune rumwe rutivi isu tine Ubuntu yakagadzira nhevedzano yezvigadzirwa zvinopindura kumusika, vanga vachitaura nezve Wayland kune zvimwe kupfuura makore mashanu uye hapana Chinhu haisi nguva yekutengesa nzira, Mir ndiyo mhinduro inonzwisisika; kubvira kukurumidza kwemusika neiyo Android (Linux, asi kwete GNU / Linux) inodya musika Windows iyo inowira, pane nzvimbo, asi idiki uye musuwo wakavhurwa kwenguva pfupi.
Iko hakuna nzvimbo yeanosimudzira makore makumi matatu, Ubuntu inopindura kumusika kwete kunharaunda, uye musika wakanaka, musika unoda zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana nezvinodiwa (nekukurumidza sezvazvinogona), ndingafarire kushandisa Debian uye kugadzikana kwayo padesktop asi chokwadi ndechekuti ichine dhizaini isina kunyatsochengetedzwa uye kumisikidzwa kwayo kunononoka, munyika ine nguva yakakosha mari, ndinobhadharwa kuiisa pamaseva, Ubuntu LTS inotonga pane desktop yangu, yakapusa, akanaka uye akatsiga. Kana Debian ine OS iyo isingade kuisa mamwe madhiraivha pane yangu Thinkpad T30, yakachena uye yakanaka desktop (ona Xubuntu) zuva iro ini randinoshandura.
Munyika yakazvimiririra pamusika, ini handigone kupa Fedore, Suse kana Mageia, nekuti zvaizoreva zviuru zvemadhora, zviwanikwa uye nguva yekudzidzisa vanhu mazana mashanu, ini ndinoda Ubuntu, iyo ine nharaunda yakakura uye inonzwisisika.
Chekupedzisira ndinoti mukana unogona kuvhurika nekuti pakupedzisira mushandisi anoida kuti ive neUbuntu Mini Remix uye UCK yakachena, yakapusa uye yakapusa, unogona kungoita yako Ubuntu kuyera kana zvirinani kutora forogo, ndiyo nzira iyo GNU / Linux ndiyo sarudzo iri kumushandisi wekupedzisira.
Pindura kuna Gibran
Handina nguva yekuverenga zvidzidzo uye zvidzidzo, ndinoshandisa komputa yangu kushanda uye ndichave ndinoshanda zvakanyanya kana ndikaita rimwe basa munguva ipfupi inogoneka. Kana zvasvika kune vanogutsa vatengi maererano nenguva nemutengo, ini handigone kuisa panjodzi yekuvatumira katarogu muODT, kana tar.gz. Kana vasingakwanise kuvhura, vanondituma kunotora dhongi uye kuenda nemakwikwi.
Kana sisadmin yangu ichitya Ubuntu, fungidzira zvaari kuzofunga nezvaArch kana Gentoo.
Iye zvino todzokera kumusoro wenyaya, isu tinofarira zvinhu zvinoshanda uye zvakaitwa nekukasira, hatina nguva yekumirira iyo yemahara, yakavhurika, yakagadzikana uye nefilosofi chaiyo application kuti igadziriswe. Vatengi havana kumirira isu. ZVANDINOVANYA ZVAKAWANDA PAMUSORO PAMUSORO PEMAFUOS ndeyekuti chero mwana wemuvakidzani anoita chikumbiro kana distro uye anochipa zita risinganzwisisike risina kugadzikana uye rinongopa hutsva hwe0.002%. Ini ndatova ndakadyiswa neyakajairika kana mapedzero maficha anovimbisa zvakawanda mune yavo inotevera vhezheni iyo ichaburitswa mumakore maviri asi haizove nayo muDebian mudanga kune mamwe makore mana.
Iwe zvaunoda dai iwe uine yakanaka yakagadziridzwa, yakabatanidzwa, inoshanda uye yakapedza software. Ngakuve nekubatana uye kuwiriranisa. Vese vanoshandira wepakati mushandisi (kwete mainjiniya, computer sainzi mudzidzi).
Kana Canonical ichida kuve nehutongi, saka kune anoshanda system iri nani pane kusagadzikana kwekugadzira, mashandiro uye kugadzikana. Saka ndinovimba Ubuntu yakabatanidzwa, inoshandisa mushandisi, inoshanda, yakanaka, yakagadzikana, uye yakachengeteka. Uye ivo vari kuzokwenenzvera avo kugoverwa kweropa uko chinhu chega chavanopa kuvhiringidzika.
Pclinux os, opensuse, kunyangwe debian, iwo ari nyore distros, anokwana kuita kuti vanhu vatende kuti ubuntu iri nyore uye kuti iwe haufanire kuita chero chinhu, ingo tarisa kumatambudziko ese aanowanzove nawo kana vhezheni itsva yabuda, uye kana iwe uchida kuitarisa, tarisa kumatambudziko akaburitswa mu omg ubuntu, ine skype, ine chrome nezvimwe ...
Iko kugoverwa kwaunotaura hakusi nyore kugoverwa kwemunhu asiri mainjiniya ehurongwa kana vashandisi vane hunyanzvi-hwepfungwa. Mune debian bhurawuza rekuzvivhara rinozvivhara nguva dzose uye pidgin haina kubatana neMSN uye yakapa matambudziko mazhinji nevhidhiyo yelaptop yangu. Ini handina kukwanisa kumisikidza OpenSuse nekuti yakaratidza kukanganisa pachikamu pa hard drive yangu. Ini handizive Pclinux, ini handizive inoshandisa package package uye handisi kuzoshandisa nekuti sezvandambotaura, handina nguva yekuita iyo geek. Kunze kwezvo, ini ndatoziva kushandisa apt uye synaptic, handifunge kuti Pclinux inondipa mapakeji ayo aisingakwanise kuwana muUbuntu.
Chandinenge ndisingafare nacho iko kunyorera, ivo havana kukwana zvakakwana, zvakafanana kupenga mune zvese zvinogoverwa. Ndo izvo zvinoita kuti kushandiswa kukuru kwe linux pa desktop kusakwanise, izvo zvinonetesa zvakanyanya kugadzirisa samba server yehofisi diki, mumahwindo ari nyore kwazvo. Vagadziri veFloss havatore mukana wewindows mushandisi ruzivo uye vanogara vachida kutamba mutambo wekutanga ne "dhizaini" inoshamisira, yakaipa uye isina hushamwari maUI. Ini ndinoshamisika: Is the MS control panel interface proprietary? Ndezvechokwadi here kuti SAMBA inogona kumisikidzwa zvakafanana nema windows? Icho chihedheni here? kana iko kuri kudzokorora ruzivo rwemberi. Kwete tese tiri ma geeks, kune vanhu izvo zvatinoita nekombuta ibasa uye isu hatipedze zuva rese tichidya zvidzidzo kana kuuraya nguva pama xvideos.
Ini ndanga ndine zvikanganiso zvimwechetezvo kubva pakuipisisa kusvika pakuipisisa muUbuntu, uye ini handidi kuve geek, ini ndaigona kutaura zvakafanana chaizvo newe.
Zvakare, kana iwe ukauya kuzotaura kwandiri nezve yakaisvonaka UI, usandipe zita chero windows, mune chero mamiriro osx.
Iwo maficha auri kutsvaga mukugovera, sezvaunotaura nezvawo, achiri zvishoma kusvika. Chii chiri nyore kushandisa kwauri? Kubaya kaviri, iyo * .exe iyo Microsoft yatijairira kudaro?
"Kusununguka" kwekushandisa kunoenderana neruzivo rwemushandisi rweOS. Nekuti mushure memakore ekushandisa Windows unoona kuti panogara paine chishandiso chausingazive zvekuita uye chingaite kuti hupenyu hwako huve nyore. Handifunge kuti Apple inotengesa pamutengo wainoita, mitsara uye mitsara yekodhi; vanotengesa ruzivo rwevashandisi. Chiitiko mune izvo zvinopfuura chero kupi zvako, pfungwa yebhokisi dema irimo. Vanhu vanoshandisa iOS havabhadhari kuti vazive kuruma maapuro, asi maitiro ekuita zvavanoita vasingazive kuti zvinoitwa sei.
Iwe haudi huzivi hwedistro? kuberekwa uye kusimudzira chirongwa icho zvakare chinogona kushanda, zvakadii iko kunogona kunge kuri kukundikana asi pakupedzisira kwakayedzwa? Zvakanaka, usashandise uye ndizvozvo.
Iko kusununguka kwekushandisa iwe kwauri kutsvaga, kune vanhu vane maitiro ako, kunotengwa nemari. Iko kusununguka kwekushandisa kunotsvaga nharaunda yeGNU / Linux kunotengwa nesimba.
Pindura kuna Sauro
Yako mhinduro inobvunzwa uye inopindurwa yega:
Mubvunzo: Chii chiri nyore kushandisa kwauri? Kubaya kaviri, iyo * .exe iyo microsoft yatinoshandisa kudaro?
A: Iko kusununguka kwekushandisa iwe kwauri kutsvaga, kune vanhu vane maitiro ako, kunotengwa nemari. Iwo maficha auri kutsvaga mukugovera, sezvaunotaura nezvawo, achiri zvishoma kusvika.
Toendesa kupi matochi acho ??? Kunyangwe ini ndanga ndatoverenga nezvazvo, ndinobvumirana nekomma yekupedzisira pamwe nepositi. Zviripachena kuti Canonical haina hanya nenharaunda yeLinux.
Pindura kuna elendilnarsil
Sekuziva kwangu kurangarira hazvina kumbobvira zvakakosha.
Pindura kune zvakakodzera
Chokwadi, asi pandakatanga kushandisa Ubuntu (8.04), ndakanzwa kubatirana kushoma. Ikozvino haisisiri kubaya kumusana, kuti uve pfuti-isina chinhu.
Neraki, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekusarudza kubva mune yedu Linux nyika.
Yakanaka chinyorwa. Zvinhu zvakaita seizvi zvinowedzera kusimbisa maonero andakanyora mukutumira kweiyo nyowani Ubuntu kurongedza fomati, Canonical inotsvaga zuva nezuva kuti iwedzere kuwedzera chinhambwe pakati pekuparadzirwa kwayo uye Yemahara Software nharaunda. Ndinoona zvinosuwisa kuti ivo vanotenda kuti nzira chete yekuvandudza ndeyekufuratira avo "midzi" yavo muSL.
PS: ine chirevo chemushandisi icho chinoonekwa mune iyo posvo, ini ndaisaziva kana kuseka kana kuchema.
Charlie Vegan akadaro
Iyi inyaya yandaifarira zvakanyanya mubhurogu iyi uye ndinobvuma, chimwe chikonzero ndechekugadzwa kwemahara mune software yemahara, iyo yandinofunga yakanaka, imwe ndeye, kusarura, kusava nehanya neudyire, vese varipo mumabhuku ekare, vachiedza kuve "vakasarudzika." "Uye" zvakasiyana "kana uchiedza kuita saApple
Pindura kuna Charlie Vegan
Ichave yesarudzo, zviri pachena kuti haana kana hanya nesoftware yemahara kana kungoishandisa pakuda
Bvisa ruvengo rwako.
Haisi ruvengo ... kunyanya Ubuntu hwakagara hwakagadzika iyo nyika isingagone kushandiswa nevashandisi ... Zvino zviitiko zvacho zvinongoda kutonga pamusoro pevamwe ... kuratidza bhatani poindi yekutarisa ... usafunge kuti kukura kwayo kwakatobvunzwa neiyo mushandisi base yavanayo uye nevanogadzira ... Ona zvinhu zvakajeka uye iwe uchaona kuti Cannonical ndiyo inogadzira rudzi urwu rweupenzi
Pindura kune freebsdick
Kune rimwe divi, ndinonzwisisa kushushikana kwako, kune rimwe divi, chirevo chekupedzisira chawakaisa chakaringana, uchinzwisisa kuti chinzvimbo cheCanonical ndechekutarisa zvavanofarira, zvinoenderana nenyaya dzisingapindirani neizvo zvemahara software munharaunda. Zvino, pamusoro pekubatana neCanonical paanotamba, izvo zvandinofunga zvakakwana (ini ndinodzidzirawo mutambo uyu xD), isu tinofanirwa zvakare kuongorora zvishoma mune izvo zvimiro zvakasviba zvakagadzirwa neRed Hat. Muchokwadi, nguva pfupi yadarika iwe wakaburitsa chinyorwa pano nezve izvo (iyo "rangano") uye zvinhu zviri kunetsa.
Ini ndinoshuvira Canonical rombo mukambani yako, iyo GNU / Linux desktop haina kutsamira paUbuntu, kunyangwe parizvino iri rimwe remabasa akakosha.
Pindura kuna MetalByte
Ini ndinongoziva, kuti kana mukati megore kubva ikozvino gnome shell yangu yasara kune imwe kana imwe iyo isina nvidia madhiraivhi kutsigira, ndipo pandakashanya muLinux, handisi kuzoshandisa ubuntu kana "wine jarto" xD
Mugore zvakawanda zvinogona kuitika, hatisati tanzwa pfungwa yeavo vanogovera vatyairi vane kodzero mune izvi.
Ndichiri kufunga kuti kune rimwe divi zvakanaka kwaari kuti atsvage zvido zvake zveCanonical, sezvinoita RedHat nekutora nzira yeGnome sezvaanoda, asi kune rimwe racho, handione kuti angakunda sei iyi "hondo ":
-Kana iri yemari, Canonical inokurudzirwa kuti itange kugadzirira Ubuntu isingachazowana matanho ekutora kutanga kutora masheleni kuburikidza nevashandisi vayo, kune rimwe divi RedHat neSuSe pamwe chete vane nzira (kana zvirinyore kupfuura Canonical ) kuita zvibvumirano zvekutengesa kuti vatore madhiraivha eiyo Wayland.
-Kana zvichikonzerwa nenhamba yevashandisi, chimwe chinhu apo Canonical, RedHat, SuSe kana chero munhu asingafanirwe kupinda kuti abvunze-anotyaira madhiraivha eWayland, asi iwo mamwe makambani evatyairi vezvivakwa anogona kuyera tarisiro huru kwazvo, kujekesa kuti Gnome neKDE zvinoshandiswa zvakanyanya kupfuura Kubatana, kudivi iro zvakare rinofanira kurasikirwa neCanonical.
Iye… handizive kuti ndomuti chii, kudada pamwe…. Shuttleworth amuburutsira munzira yaanozove neyakanyanya, yakaoma, nguva yakaoma yekuenda nayo pasina kuita kubatana kwakakosha kwenyika ye linux.
Pindura kuna DanielC
Kutengesa ruzivo rwemunhu wega rwevashandisi vakaunganidzwa ne spyware uye kuzadza kumeso neruzhinji ndeimwe nzira yekuita mari zhinji, ona google.
Tichaona kuti Amazon inounza zvakadii ...
Pindura kune vashandi
At the least, software-centre 5 inouya muDebian Wheezy haina spyware iyo inosanganisirwa muUbuntu (iyo inobva kuAmazon, hongu). Zvisinei, Cannonical akandipa chimwezve chikonzero chekuramba ndichishandisa Debian kusvika kumagumo ezuva rangu.
Hongu, vashandi, mari yakawanda inouya kwavari zvekuti vanomanikidzwa kukumbira zvipo kana vachitsvaga Ubuntu ISO.
Ini ndinofunga kuti nekuda kweiyo pfupi meseji yangu handina kuita kuti ndinzwisisike.
Zvandiri kureva ndezvekuti, sekutaura kwako, Canonical haina mikana yakawanda yekuita mari neiyo OS (Kuitengesa seMac OS X kana Window $ inotengeswa hakufungidzike.).
Saka chasara ndechekuti ive system izere nespyware uye spam, uye ini nditi FULL, nekuti mashoma chete haana kukwana, ndosaka ndaisa izvo "Tichaona kuti amazon anounza sei iwe ..."
inoita 8 makore
Ini handitombo shandisa Windows waini uye os x.
Ini ndinofunga iwo anonongedzera ari kuyedza kuita zvakafanana negoogle ne android uye chromeOS kana vachigona kudya zvishoma zvemugove wemusika, asi kwandiri chinhu chega chavachazowana ndechekunyura zvakanyanya.
vanhu vanoziva vanorwara nepfungwa
Ini ndinobvumirana newe, Google inoshandisa iyo Linux kernel zvese mu Chrome OS uye mu Android kuita bhizinesi rayo, izvo zvakanaka pakushanduka kweiyo kernel asi kune iyo yese iyo ecosystem - GNU - HAPANA
Ubuntu inoda kutevera nzira iyoyo, uye iri mukati mekodzero dzayo, munguva pfupi inenge isiri GNU / Linux yenguva dzose, kana kunyange GNU / Linux, asi Linux - kernel - ine yayo ecosystem, chisarudzo icho se kambani Ivo vane kodzero pasi rose, uye isu vedu vasingade kuishandisa tinoshandisa Mint kana Manjaro kana Sabayon.
Dambudziko nderekumira "kumashure" mubatanidzwa unova iwo ma distros, makwikwi uye kubatana, nekuti Mir, iri GNU, haina kuitirwa kuti nharaunda yese ishandire pamwe nekuinakidzwa, seWayland, kunyange hazvo yakatokodzera iyo Wayland Zvakare kubhaiza forogo yake ichangoburwa yemunhu mumwe asina hanya neanogadzira emahara, rega aone kana ariye, uye kana zvirizvo, sanganisira zvaakavandudza.
Akawandisa egos ari kuonekwa muLinux nyika iyo inoratidza kuti iri kuramba ichiwedzera bhizinesi, uye nekudaro vanhu vazhinji vasina kugona vari kujoina - Peter's Principle -
Pindura kune mitcoes
Munyori wenyaya azere nemuromo achitaura nezverusununguko, rusununguko uye rusununguko, asi zvinoitika kuti kana kambani (kana munhu) achida kuronga chimwe chinhu chitsva mukati me software yemahara, hazvina kunaka. Zvino zvinoitika kuti kana iwe ukapinda munyika ino unofanirwa kushanda pamwe nezviripo, uye usazombobuda mudanga, nekuti ipapo kushoropodzwa kunonaya pauri. Zvakanaka, handibvumirani. Rusununguko nderwese chinhu. Uye zvino anotaura nezvekuti zvicharamba here kumhanya kde yakanangana nemir uye blah blah blah. Iko kushoropodza hakuna musoro sekutaura kuti Arch kana Debian marara nekuti havashandise zvakafanana kurongedza seRed Hat. Kana yemahara software ichibatana nezviripo kana kuenda kunze (zvinoita kunge ndizvo zvinotsigirwa nepositi), saka zvirokwazvo, ndakakanganisa pandakasarudza iyo yekombuta yangu.
nokutendeseka iwe wapfuura nemumakomo eubeda, uye waita fananidzo inokodzera danidziro yezvematongerwo enyika, makorokoto nekushaiwa kwako kupokana.
Ichokwadi ndechekuti komendi yako izere nenharo. Zvisinei.
Ini handisati ndaverenga imwe nharo inoenderana nei chikonzero chekuti Canonicla inogadzira yayo giraidhi server kana pasuru system yakaipa. Kwete. Ini ndinongo verenga ma crybabies avo vanoti kana asiri kuzotakura ichi kana icho, kana kuti haashande pamwe neichi kana icho chirongwa. Zvakanaka zviri nyore kwazvo, Canonical inovandudza mashandiro ayo uye inozviitira zvinhu zviri pachena. Iwe hausi kuzogadzira chimwe chinhu chausingazoshandisa (senge kde rutsigiro). Hazvina musoro. Izvo hazvina musoro sezvakaita mienzaniso yandakapa kare (uye yaunodana madhemagogi, izwi rine fashoni kwazvo nguva pfupi yadarika pavanofunga zvakasiyana newe). Uye kutaura kuti zvinoitwa neCanonical zvakashata nekuti zvazvinonyatsoda kuve nekutonga kweayo giraidhi server ... zvakanaka. Izvo ndezvekuti ini ndinoseka kuseka muchigaro changu ndichiverenga akawanda mabhuru. Kunyanya, chii chakakanganisika neizvozvo?
Mhoro Lupine_3rd, ini ndinongoda kuita fananidzo yezvingave zvichitaurwa nevagadziri uye nei vachinyunyuta zvakanyanya.
Ngatimbofungidzirai kuti kubva pamberi pa2012 une musikana, vanodanana zvakanyanya uye vatanga kuronga muchato. Watanga kugadzirira uye unofara kwazvo. Pakutanga kwegore rino unoona kuti musikana wako ari kufambidzana nemumwe munhu muchivande kubva 2012, zvino waizonzwa sei?
Zvakanaka, ndinofunga ichi fanano yakafanana, haufunge?
Kufananidza kwakanaka, asi hakuna nzira iyi: Musikana wako anobata ruoko rweVANHU VOSE nekuti aizvida nenzira iyoyo. Iye akasununguka. Saka dambudziko nderei? Godo nekuti mumwe wevaya vanoisa ruoko rwake pairi, senge, zvinoita nani?
Ndiri kureva, kuenderera fananidzo 😉
Ndinozvipindura ndega nekuti handikwanise kupindura meseji yaGiskard.
Hongu, musikana wako anogona kuisa maoko avo pane zvese zvavanoda uye zvese zvavanoda, asi chakashata kushandisa zvisizvo kuvimba kwako uye zvipikirwa. Kana chibvumirano chikasvika, chingave chakanyorwa kana kutaurwa, zvakajairika kuti kana munhu akanyengerwa vazhinji vanozviona nemaziso akashata.
Kutenderedza kunze, kana Canonical ikubata ruoko iwe unozoifarira: -D?
Shamwari, ndanga ndichingotevedzera fananidzo yako. Muroora mune ino MAHARA SOFTWARE. Kune iyo munhu wese anogona kuisa ruoko. Ndine urombo kuti hauna kunzwisisa chirevo.
zvinoitika ndezvekuti musikana iyeye ari vixen xDD
Giskard, ikozvino ndanzwisisa kwawanga uchienda. Ndakabata imwe nzira.
Zvisinei, mhinduro yako yainakidza kwazvo!
Rusununguko rwekusununguka runofanirwawo kuve nemipimo nemarambidziro. Ini handikwanise kurova imwe nenyaya yakapusa yekuti ndakasununguka uye ndinogona kuita chero zvandinoda. Uye zvakaitwa ne ubuntu pakagadzira yavo yakajeka graphic yaive yekupa yakaderera kurova kune iyo protocol iyo yakanga yatosimudzwa kwenguva yakareba uye kujekesa kuti havafarire kana havana hanya nehunyanzvi hwe software, iyo inongomisikidzwa neavo vanoita kunge vasina hanya kuti aenderane nesoftware yemahara.
Pindura kuna gustawho
Chaizvoizvo, iye aive amutsa A PILE OF YEARS, uye pamberi paMIR zvaitaridzika kuti zvaisazombopedza kuita zvepamutemo, uye izvo zvemanyoro hazvikwanise kuzvibvumidza….
Ndinobvumirana newe shamwari. Canonical ikambani uye inofanirwa kuzvitaririra pachayo. Zvimwe zvacho ndezvekuti ane hunhu here kana kuti kwete uye ndoimwewo nyaya. Asi ini ndinofunga isu tanga tiri mumwe wevashoma vakaverenga chinyorwa uye isu takangozviona izvo: kuchema pasina chikonzero.
Zvino, kana zvese zvataurwa nechinyorwa zvikaitika, pamwe chinyorwa chakadai chingave chakakodzera.
Handizive, ndinonzwa kuvenga chaiko. Sezvandinovenga kuyaruka. Chinhu chakadai se "MTV hachiratidze mavhidhiyo, kutsamwa kwandakaita, hauchazoona iyo shit shit, mushure mezvose ini ndaisatomboda"
Iwe hausati uchipa chero tsananguro, kunze kwekuti iwe unogona kunge uri fan fanboy kana iwe wakabhadharwa ne ubuntu. Kubva pane zvaunotaura zvinoratidzwa kuti hauna hanya nematanho, hauna hanya neyakavhurwa uye hauna hanya kuti sarudzo yeUbuntu inogona kusiya Linux zvakanyanya, iine mamiriro emadhivhuru madhiraivhu senge bsd, kunyange hazvo, mune Mune chero kesi, ndinoona zviri nyore kuti ipere rutsigiro mir kupfuura wayland, sezvo iyo yekupedzisira iine tsvuku ngowani, intel nemamwe makambani makuru kumashure kwayo. (asi ndakanganisa samsung uye tizen futi)
Ndiko kupokana, kana vamwe vakaronga kugadzira linux, apuro, vachitenda kuti vanogona kutamba ne linux sezvavanoda kuseri kwenharaunda, vanogona, asi zvino vasanyunyute kuti ruvengo kuvanhu ava rwunowedzera zvakanyanya . Ini ndoda kushandisa osx kana windows, pane ubuntu, izvozvi.
Ndine urombo kuti iwe wakasimuka parutivi rwakaipa rwemubhedha nhasi ndokunyora iyi posvo.
Ini ndaida kunyora ichi chinyorwa kwemazuva mazhinji, chete kuti ndine usimbe kunyora, saka ini ndichasimuka zvakare kubva kurudyi kwembereko, kwerusununguko, uye kwesource, mazuva ese.
Rusununguko zvinoenderana neFSF hakushandise madhiraivha eimba, saka haufanire kutarisira zvinoitika nemir, wayland nezvimwe, ramba uchishandisa mutyairi wepachena
Ichokwadi ndechekuti ini handidi kuramba ndichiitisana nharo pamusoro penzombe iyi. Ndiri kungokupindura chinhu chimwe. Iwe unoti ini ndiri fan fanboy kana kuti iye anondibhadhara (sekunge izvo zvakashata). Zvakanaka, ini ndinoshandisa Ubuntu, ASI ndinoishandisa neGnome Shell. Saka kana rimwe zuva zvese zvaunotaura kwandiri zvikaitika, zvinondimomotera, nekuti ini ndichafanirwa kusarudza pakati pekuenda kune kumwe kugovera kunoitsigira kana kuenda kuUnited. Asi kunyangwe zvakadaro, ini handisi kuzoshora zvinoitwa neCanonical kana zvaasingaite, nekuti kusvika parizvino ivo vandipa chigadzirwa icho kwandiri chakanaka uye chemahara. Saka, chero sekuishandisa kwandinoita, handifunge kuti ndine mvumo yekuchema uye kurova nekuti vanochinja ichi kana icho chinhu. Zvinoita sekunge shamwari inondikoka kuzodya kumba kwake uye ini handidi izvo zvaakabika uye ndinozvikanda kumeso kwake. Chimwe chinhu chakasiyana chingave kana ndikaibhadhara, kana ivo vakandimanikidza kuiisa pakombuta yangu hongu kana hongu. Asi izvo hazviitike, saka….
Uye usati wandiudza kuti ndiedze mamwe ma distros uye ko kana zvirizvo uye kana zvirizvo, ndinokuudza kuti ndatozviita. Ndanga ndiri paLinux kwemakore mashoma ikozvino uye ndichiri kushandisa Ubuntu (ndiyo yandakatanga nayo), nekuti ini handisisina nguva kana chishuwo chekugadzirisa Debian kana Arch, sezvandakaita kare uye Ubuntu inoshanda zvishamiso kwandiri uye panguva imwechete zvinondipa kurerukirwa zvandiri kutsvaga.
Mashoko ako akaratidzika kunge akabudirira kwazvo very
Ndanga ndichishandisa Ubuntu kubvira Hardy, uye chokwadi ndechekuti ini ndagadzikana zvakanaka chaizvo ndiyo base system uye madhiri mapakeji, ndakashandisa vamwe futi, senge fedora uye kupfuura Chakra nezvimwe, uye kusvika pandinoenda ndizvo pachena kuti Sekuru Shuttleworth ndivo vanoisa «pasita" kuti aite zvaanoita uyezve zviri mukumufarira nekuita zviri nyore, achienda kure nezviri Gnu / Linux, pachikamu ichi zvaanoita zvakaipa, asi iye muridzi uye ishe we "empire" yake, asi Munyika diki ino, hapana munhu anomanikidzwa, kana uchizvifarira unomutevera uye kana zvisiri "musuwo".
Asi ngatirege kudhonza vhudzi redu kana kukanda mawoko edu mumisoro yedu nekuti kune mapurojekiti akanaka kana ari nani pane aya eiyi «huku», muenzaniso Manjaro kana weSolusOs, Chakra uye zvakadaro pane runyorwa rurefu.
Ndiwo maonero angu ekuzvininipisa. Asi izvi zvinounza uye zvichaunza mwaka wakanaka.
Kwazisai Linux shamwari
Pindura kuna Somarropellejo
Kana dambudziko risiri iro, pano isu tiri kutaura nezve izvo zvinyoronyoro zvinoda kuchinja chimwe chinhu cheiyo gnu / linux musimboti uye inogona kusiira vamwe vese kunze ..., vasina kana pfungwa.
Kana iyo posvo ichinongedzera kwairi, asi zvakataurwa kare, mukomana akafukidzwa uye ane nechirango chamwari kuti ave mupfumi uye anoshandisa mari mumabhizinesi ake uye iye achazoda kugadzira yake yekushandisa system (ona kuti ini ndinoti anoshanda system uye kwete kugovera) kuravira kwako uye whim, semuenzaniso mac os anobva unix, munguva pfupi yapfuura Andriod "linux" inouya kubva kuGoogle, pano "ca" imwe inounza ember kune yake sardine.
Pakupera kwezuva pachave nevanhu vanoshandisa "Ubuntu OS", mamwe maWindows, mamwe Mac uye imwe Linux, uye kune mumwe nemumwe izvo zvavanokanda kwavari ...
Canonical kunhuwa kwemhepo ina, kukwasva kubva kune iyo ichinyura ngarava.
Pindura kune dhunter
Wagona kutaura! Zvino, svetuka kubva kubuntu chikepe uye upinde pane huru Debian cruise.
Kubuntu chimwe chinhu chakatosiyana pari zvino, hachisisirizve yakanangana neCanonical asi munharaunda, uye dai Ubuntu yaizonyura, kunyangwe Kubuntu naXubuntu vaine nguva yakaipa, vane mikana yakawanda yekukwasva vega uye semuenzaniso kuvimba zvakananga paDebian.
iyo graphic server iyo inokwanisa kuve iri nani inotsigirwa neve graphic vagadziri ndiyo ichave iyo inokunda, uye ini ndinofunga iyo ichave iri MIR. sezvo padiki nepadiki zvese nvidia, amd uye intel ndidzo dzinotanga kushanda pamwe necanonical, uyezve ichi chiutsi chichaendeswa kugirazi, uye mir inopedzisira yave muyero.
Pindura kune renyeredzi
iyo mari iri mu linux iri munzvimbo yebhizinesi, uko ubuntu isingatonge. Chero zvazvingaitika nvidia inogona kunge icharamba ichitsigira x kwenguva yakareba, senge frebsd inotsigira
Mubvunzo unenge uri muyero weiko?
Nekuti sekuziva kwangu, standard inoreva chiyero icho munhu wese anogona (uye anofanira) kutevera. Asi mune iyi kesi zvinongoshanda chete kuCanonical zvigadzirwa,
Sezvo nekubatana, iwe unogona kutora kuti yakanaka uye yazvino sezvaunoda (zvakanyanya kuzviisa pasi nenzira) asi kubva ipapo kusvika pakuve kana kuzove muyero pane musiyano wakawanda.
Chii chichaitika ndechekuti Canonical nema OS ayo anozoparadzana zvachose kubva munharaunda uye vagadzire imwe nzira kune vese avo vanokoshesa "rusununguko" rwekutamba mitambo yechizvarwa chinotevera kupfuura rusununguko rwusingashandiswe uye kuongororwa.
Uye icho hachisi chinhu chitsva, chakatovapo kwenguva yakareba, chete ikozvino pachave neimwe imwe sarudzo yekirasi iyoyo yevashandisi.
r @ y akadaro
Intel yanga ichishanda neWayland kwenguva yakareba, kune rumwe rutivi yakaratidzwa kuti Wayland inogona kushandisa Mesa-Android
Pindura ar @ y
Mir inogona zvakare kushandisa iyo Android-tafura sekudana kwaunovaidza
Ini ndinoona zvakawanda kuti inoenda kutonga pane chero chimwe chinhu
Ini ndinotsigira zvizere Ubuntu. Kune zvinopfuura mazana matatu ekuparadzira linux, ayo mazhinji asingape chero chinhu chitsva, panzvimbo pezvo Ubuntu anoedza nemapurojekiti matsva senge Unity desktop, Ubuntu foni, mir, nezvimwe. uyezve gare gare vanoenda paUbuntu vachiti haitsigire yemahara software uye kuti inongotsvaga kubatsirwa kwayo, asi ini ndinozvibvunza ini, handiti Unity, Mir nevamwe mahara software? nenzira yekuti chero munhu (anoziva) anogona kurodha pasi sosi kodhi uye kuigadzirisa kuti ive nyore. Ndakaverengawo kuti vamwe vanoti canonical haisati yambofarira software yemahara uye zvakadaro peji reGNOME repamba rinotambirwa (kana iro izwi riripo: P) necanonical uye muna 300 Mark Shuttleworth akapa mari yakawanda kuchirongwa cheKDE ichiva chimwe yevatsigiri vakuru ve KDE, muchidimbu ini ndinofunga vanopa kukosha kwakanyanya kune distro iyo vangangodaro vasingatomboishandisa.
Dambudziko harisi iro, gnome uye kde vari kuendeswa kune wayland, havazoshandure marongero avo nekuti canonical inotenda neimwe nzira, izvo zvisingaunzi chero bhenefiti pamusoro penzira, nekuda kwekuti canonical inoda kudaro. Ikoko dambudziko.
Uye dambudziko nderei? hapana gnome kana kde ichafira rutsigiro rwechokwadi kana kumira kutsigira wayland. Mumwe nemumwe anosarudza nzira yavanoda. Kwandiri Ubuntu ikambani inotsigira yemahara software nekugadzira mapurojekiti matsva. Kana pachinzvimbo chekutsigira mapurojekiti ari kuenderera, ivo vanogadzira mitsva, imhaka yekuti vane zvimwe zvikanganiso zvezvido zvavo. Usaedze kutsvaga iro rima divi apo pasina.
Imhosva here kuti nvidia haina madhiraivhara emahara? Panzvimbo pekumutsoropodza nekusava nazvo, zviri nyore kushora canonical, inotonhorera uye iri mufashoni.
Pindura kune rusununguko
Muchiitiko chekuti mir haigamuchire rutsigiro rwe nvidia kana amd, ini ndichazoda kuona kumeso kwauinako, iwe neako egoism. ipapo zvinoratidzwa kwandiri kuti hauna hanya nenharaunda, kana linux, kana openource, asi chete ubuntu.
Chekutanga pane zvese, usanditonge usina kundiziva, kunyangwe zvishoma kune komendi isingapesane neyakavhurwa kana linux zvakajairika. Ndanga ndichishandisa Gnu / linux kwemakore gumi nematatu, uye ini ndapa zvakawanda pasi rino, ndinotenda zvakare nebasa rangu. Kuva munyori wepositi, iwe unofanirwa kuratidza muenzaniso.
Humwe hudyire mumashoko angu ndihwo hwaunoda kuona. Uri kuyedza kupa mhosva canonical yechimwe chinhu chaunofungidzira kuti amd kana nvidian ichiita, pane kuvapa mhosva. Iri dhirowa. Ini ndine hanya neUbuntu zvakafanana nechero kumwe kugovera, ini handina kana kumboishandisa mumuchina wangu, asi izvo hazvinditadzise kuona chishuwo icho vamwe venyu vanacho nezvese zvinonhuwirira zveUbuntu.
Ini ndinosimbisa, zviri nyore kupomera canonical kupfuura vamwe.
Iwe unoramba uchikanganisa, nvidia uye amd havana kana mhosva yekuti canonical iri kuenda kukamura linux zvakatowanda, ichigadzira rakasiyana graphical server, nekuda kwekuti ivo vanonzwa senge. Ivo havana kana hanya nezve linux uye haugone kuvabvunza kuti vatsigire zviuru zvina, saka mune iyi nyaya ndeyezvakanaka kupomera, nick yako haivimbi nezvaunonyora.
Huswa chaihwo hwekupedzisira hwaizove hwaDebian kushandisa Mir pachinzvimbo cheXorg uye / kana wayland.
Kana PC yako ikashandisa NVIDIA seyakada kadhi revhidhiyo, saka kushandiswa kweRHEL, Mint kana Ubuntu kunoshanda (yakawanda Mint nekuti muUbuntu ndinorasika muUbatana).
Ngatione ..., nekuti ndiri kufunga nezvekutenda kuti Ubuntu inogona kunyadziswa munhoroondo, tichiona sezvo isingagamuchire rutsigiro rwainotenda, tichaona.
Iyo poindi ndeyekuti mipiro yeUbuntu iri, kune chikamu chikuru, inongoshandiswa muUbuntu, senge Ubuntu One, ndiko kuti, havana pfungwa dzekugadzira chimwe chinhu chingashandiswa kune iyo Linux nyika mune zvese, asi chete uye zveUbuntu chete, uye apa ndipo panogumbuka vanhu, nekuti havasi vese vanotaura naUbuntu neCanonical uye hatifanirwe kumanikidzwa kuzviita, kunyangwe hazvo mupiro wakapihwa naVaShuttleworth muzuva ravo.
Uye tarisa, dai chaive chishandiso chakati, kana chakatarwa chinodzora nzvimbo, pasa, asi kana chiri kutambidzwa iko kutsigira kwakajeka kwenzvimbo dzese dzedesktop neimwe nzira handifunge kuti Canonical inofanira kumanikidza zvavanofarira.
Unogona kutaura zvakakwira, asi kwete kujekesa
Kunyangwe ini ndisingashandise, ndine Ubuntu One yakaiswa paArch yangu, sekusimbisa kwandamboita Unity pairi.
Mhinduro yaive kumashoko apfuura XD
mune arch inogona kuiswa kubva kune ese xDD, asi sezvamuchaona, nekuda kwenhamba hombe yezvinhu zvine zvigamba uye kutsamira chete kubva kuUbuntu, haizombove mune zvinyorwa.
ahh lol! Ndine urombo, kana iri munharaunda repo, unogona kuona kuti yatosiya aur xD
Yakajeka, kana iyo mvura
Zvese zvinhu zvinogona kuiswa pane arch, asi kumhanya kubatana pane arch kunoda basa rakawanda uye zvigamba kubva kumushandisi (pane chinyorwa pane arch foramu nezve izvi).
Ndivo Link akadaro
Sezvavanotaura kubva kuAUR iwe unogona kuisa zvinhu zvakawanda (kunyangwe imwe chirongwa cheWindows chinoshanda nemazvo pasi peWine), asi kuisa Unity, telita.
Zvino, pamwe muArch uye yakaparadzwa ndinogona kuisa Kubatana (mushure mekupedza nguva yakareba ndichitarisana nekutsamira, kunyangwe ndichishandisa Yaour kana Packer), asi ikozvino funga nezve mamwe ma distros, saDebian uko kana uchifanira kubatisisa yako, uye ita pasuru. deb inotakura yega.
Uyezve iyi MIR. kuti vamwe Ubuntu-based distro vangazopedzisira vaishandisa (izvo zvandinozeza zvikuru vanhu veMint vanozoita).
Chinhu chimwe isoftware yemahara uye imwe yacho kuita kuti ingoshanda chete paLinux distro, ichisiya zvimwe kumashure.
Zvisinei, ngatitorei nguva kuti tione zvinoitika neWayland, ini ndiri mumwe weavo Xorg, kunyangwe ichishanda nemazvo, iri kutanga kuremerwa zvakanyanya.
Pindura Mwanakomana Chinongedzo
Ini ndinofunga zvakafanana, hausi wega.
Jose Miguel akadaro
Makore apfuura ini ndakasiya Ubuntu, Canonical, uye zvakanyanya kukosha, zvese zvavanomiririra.
Iyo Wayland musoro wenyaya yaive yekupedzisira mashanga, zvekuti ndakafunga kudzima nezve makumi masere mashumiro akatsaurirwa kuUbuntu kubva kublog rangu.
Canonical uye zvichidaro Ubuntu, zviri zvavo, uye ndinofunga "zvakanaka", asi ivo havana rutsigiro rwemahara software nharaunda.
Vakafanana nehutachiona hunodya husingapi chero chinhu kudzoka, nzira yavakasarudza.
Pindura José Miguel
Cannonical ndiyo inonyanya kusaonga kambani yandakaona kana zvasvika kune yemahara software munguva pfupi yapfuura.
Ndinoonga iwe uchigadzira iyo software-yepakati, nekuti pasina iyo, ndingadai ndisingazive chaizvo izvo mapakeji anonzi kana ndikasarangarira (iyo vhezheni iri muDebian iri nani kwazvo kupfuura iyo inosanganisira Ubuntu uye mhuri), iyo GDebi uye yekuburitsa padhi.
Asi kana iwe uchida kuziva kana paine imwe kambani yakaipa kupfuura yeCannonical, zvakanaka ndinokuudza kuti Apple ndiyo inorirova (maseva avo anoshandisa Linux neWindows Server 2008 uye kusvika parizvino hapana zvichemo kubva kune vazhinji vashandisi sezvo ivo vachivawana vachinetseka neiyo Aqua interface uye nyore kwayo kumisikidzwa kwemaapps avo).
Murazvo wakanaka wakagadzirwa nemapandev92. Ndinovimba inoita imwe murazvo asi yakatsaurirwa kunaDebian.
Musiyano ndewekuti apuro haikutengese mahara software, saka iri kubuda kunze kana chero chinhu, kubva pakutanga inokuudza izvo zviripo.
Huye, Mac ine Bhash uye Bhash iri GPL # uye ini handina kuona kuti zvigamba zvavanoshandisa kumhanyisa zvirimo kana chimwe chinhu.
asi zvakanaka, nguva ichataura Quen Win, asi kubva pane zvandinoona ZVESE kubva kumativi matatu isu tichapedzisa nekushamisika kukuru
Ini handione chero chakaipa neCanonical yekuda kugadzira yavo software zvinoenderana nezvavanofarira. Zuva iro Canonical inoedza kumanikidza vamwe kuchinjira kune yavo software pachave nematambudziko, asi KDE yatotaura kuti havangatore Mir.uye chimwe chinhu chakaitika? HAPANA, chero munhu anoda kujairana naMir anofanira kudaro, uye chero ani zvake asingangodi chete kuti asazviite.
Canonical ikambani uye inofanirwa kutarisa zvaunofarira, zviri nyore kudaro. Chii chakanganisika navo vachida kubatanidza chikuva chavo naMir? Ivo vanoda server iyo inogona kushandiswa maPC, mapiritsi, mafoni, nezvimwe, uye sezviri pachena Wayland haina kuvabvumidza kuti vashande saizvozvi, uye ndipo pakazvarwa Mir, akagadzirira.
Kana rimwe zuva uchazofanira kushandisa kde nemadhiraivha matsva, isu tichataura.
Zvakanaka, NDINOFANIRA kushandisa yakavhurika sosi madhiraivha eATI yangu nekuti vanhu ve AMD (uye kwete Canonical) vaisada kuchengetedza kutsigirwa kwekadhi rangu.
Uye hongu, kadhi rangu reATI nderekare. Uye usati wandiudza kuti nditenge imwe nyowani, ndipe mari yacho. Saka kubva mumaonero angu murume akaipa i AMD. Asi kwete. Ndinozviona sePlanor Obsolescence. Kuti ndakamonera? Zvakanaka hongu, chii chatichaita? Asi handicho chikonzero nei ndichichema.
Uchaona kuti pakupedzisira izvi zvese zvinopera pasina uye pachave nerutsigiro rwezvose.
@ pandev92, urikuchemera rova ​​iwe usati wagamuchira. Tichaona zvinoitika naWayland naMir. Panguva ino iwe unovimba nemafungiro ane njodzi senge vazivi vasina mutengo.
Kana chirongwa mumanapukeni chakakwanisa kuburitsa chimwezve chakavandudzwa uye nerutsigiro rwakawanda… Vakomana veWayland vachataridzika zvakanyanya kunyangwe vachishuvira zvakanyanya (handifunge kuti zvichaitika). Kunyangwe isu tine vatyairi vanezvivakwa zvinoenderana nezvinosarudzwa ne AMD neNVIDIA. Saka iwo makirabhu kune avo akavakodzera (panguva iyoyo).
Iwe unogara uchifanira kuchema pamberi kuti uzvidzivirire, kuti zvisazononoka gare gare, kugara wakamirira kuti matambudziko ese auye kwauri hakusi kungwara.
Chokwadi, kuchema pamusoro pechinhu kuchenjera. Zvaunotaura XD.
Vagadziri ve KDE ivo pachavo vataura kuti vachamirira zviitiko. Parizvino havazotsigira Mir nekuti haina basa uye haina kana mukana pamusoro peWayland (asi havasi kutonga kunze kwekushanda naMir mune ramangwana kana vachiona zvakakodzera).
@ Windóusico: Zvataurwa nevagadziri ve KDE ndezvekuti havazotsigire Mir kudzamara iri sevha yeplatifomu imwechete (Ubuntu), pamusoro pekushandura mhando yerezinesi reMir uye neinjiniya iyo isingabvi paTDD Kubudirira). Ini handifunge kuti Ubuntu inoda kuchinja izvo zvinhu uye handifunge kuti vanhu veKDE vanozoregedza (ini ndinovimba kwete).
Dani, hazvisi izvo "hapana chakaitika" nekuti KDE haina kuenda naMir asi naWayland, shanduko hadzisati dzaiswa, mhedzisiro yesarudzo idzi isu tichatanga kuona kubva gore rinouya apo KDE neGnome zvakazara (kana mu chikamu chakanakisa) chakaiswa muWayland, uye Kubatana muMir.
Ini handione chero chakaipa neUbuntu ichienda nenzira yayo, zvakasununguka kuzviita.
Chandisinganzwisise inyaya yekuda kuviga X11 / X.org, munhu wese anotaura nezve Wayland kuve nani uye kuti X.org haichashandi uye nezvimwe zvinhu, kana ichinyatsogadzikana, inoshanda chaizvo uye chiri chimwe chinhu Yakura kuti yanga ichikura kwemakore mazhinji. MuWindows hapana chakafanana neye graphical X system inobvumidza zviuru zvezvinhu zvaunogona kuita pane network nekuda kweayo mutengi-server dhizaini, asi hapana anoti Windows haichashandi pachinhu icho. Mumwe munhu anogona kunditsanangurira izvo zvisingakwanisike uye kushaya basa X11 / X.org inofanirwa kuda kuitsiva?
Pindura kuna kikee
Xorg vanogadzira ivo pachavo vari kugadzira wayland. Muchidimbu, iyo X.org kodhi yakanyanya kunetsa kuchengetedza, zvinotora vanogadzira basa rakawanda.
Muchiitiko ichocho hazvina basa, nekuti izvo zvinoreva kuti ivo vanozogadzira yakanaka inoenderana nhete kuitira kuti maapplication anoshandisa Xorg ashande nemazvo muWayland.
Sekuziva kwangu hakuna 'Vesa' Mutyairi weWayland uye chero bedzi izvo zvisina kugadziriswa hapana chekutya neX11
Pindura kuna Alvaro
Yakadai yakanaka kutaura uye hapana kuombera. : ') * rova ​​maoko ako *
LOL! Yangu post. Sezvineiwo, ndinokumbira ruregerero kunharaunda yeDesdeLinux nekusarudza zita rakashata repositi ...
Hazvina basa. Chinyorwa chako chiri nani kunyorwa kupfuura changu (ona https://blog.desdelinux.net/convirtiendo-a-un-windowser-en-linuxero-como-hacerlo/).
Ndakaifarira iyo, yakanyorwa zvakanaka kana kwete. Ndiri kuzoona kana ndikazviisa mukuita neshamwari inODA Windows (baba vake vaive mumwe wevaya vakaunza Win2 kuColombia).
Ivo vanopomera Canonical yekuzvida here?
Linus Torvalds paakati "Linux yakabudirira nekutenda kuzvida uye kuvimba", kune vazhinji vakaombera kusvika pakufa. Asi ikozvino kana Canonical ichiratidza zvirevo zveTorvalds nekuvandudza kwayo kwoudyire, Ubuntu idhimoni.
Canonical yakagadzirisa iyo Amazon lens ad infinitum, nekuda kwekusayambira mushandisi izvo izvo lens zvaiitwa uye kusaratidza ruzivo rwepachivande kubva pakutanga.
Asi ini handione zvakanaka zvekushoropodzwa kweCanonical naMir.
Nezve vatyairi ve nvidia, iva nechokwadi chekuti kana RedHat kana SUSE ikaisa Wayland, ndine chokwadi chekuti vachazvitsigira.
Saiye Kubuntu uye KDE mushandisi, tichaona. Zvirokwazvo kucharamba kune zvinyorwa zvinotsigira X neWayland. Kana isu tichaona izvo vanhu vanotarisira Kubuntu vanofunga.
"Ini chaizvo ndinofunga zano chairo reakavhurika sosi ndeyekuti iro ribvumire munhu wese" kuzvida ", kwete zvekuedza kuita kuti munhu wese abatsire pane zvakajairika."
Ndinofanira kutaura kuti handibvumirane nekutora zvirevo zvakadaro, asi pane chirevo maari.
Kuchidudzira zvakataurwa naLinus Trovals:
"Parizvino ndinofunga zano rechokwadi rezvinhu zvakavhurika nderekutendera munhu wese kuti ave 'noudyire', hazvisi zvekuyedza kuti munhu wese ape chimwe chinhu kuitira zvakanaka."
Kuti ndizvo chaizvo. Takazviona kwemakumi emakore mumatafura uye software ari maforogo uye maforogo emaforogo, yega yega inogadzirwa nemaonero ayo, kungave nekuti yekutanga haina kubvumidza shanduko kana wechipiri aisada kupa mazano avo ndokutanga avo vakananga ku pachena pasina vamiriri.
Ngatione, ini handina kuidudzira nekuti muturikiri weGoogle akazviita nemazvo. Dudziro yacho ichave:
"Muchokwadi, zvinoratidzika kwandiri kuti pfungwa yeOpenSource ndeyekutendera munhu wese kuti ave 'noudyire', kwete kuyedza kuti munhu wese abatsire pane zvimwe zvakanaka."
Kana ichishandurwa ne "Parizvino", zvinoita sekunge Torvalds anofunga kuti parizvino pfungwa yeOpenSource yaaive nayo, yakamonyaniswa nevamwe, uye haina kudaro. Torvalds anofunga kuti kubudirira kweOpenSource kwagara kuchikonzerwa neimwe nzira kune kuzvida kwezvirongwa.
Mukutaura kwechokwadi, asi yeuka kuti munguva yakapfuura, pakave nekuvhiringidzika pakati peveruzhinji pakati pemazwi ekuti "mahara software" uye "rakavhurika sosi." Uye zvakare, muma90's, ivo vakatsigira huzivi hwemahara software kupfuura yakavhurika sosi sezvo software yezvivakwa panguva iyoyo yakanga isati yasvika kuLinux uye yaive yakatarisana zvakanyanya nehumambo hweWilloftoft Microsoft.
Zvino, nekuda kwemabloves eNVIDIA, ATI nevamwe, vazhinji vabva kufilosofi yemahara software kuvhura sosi, nekuda kwekuti "rusununguko rwune" rune kukanganisa kukuru murusununguko 4, nekuti rinotarisa pane zvakajairika. zvakanaka uye kwete nemaonero ako.
Ini handina ruzivo rwakanyanya nezve chirongwa cheMir, asi ndoda kubvunza kune avo vane ruzivo kana iri Free Software chirongwa? Kana zvirizvo, sei uchitsoropodza kuti Ubuntu haitsanangure zvinhu zvitsva? Sei uchishoropodza kuti ivo sarudza kugadzira imwe chirongwa kunze kweWayland? Kana chirongwa chakavharwa? Uye ndosaka kutsamwisa kuti hakuna munhu anogona kuchishandura kana kuishandisa pachido?
Sezvauchaona, ivo vanongova kusahadzika, mumwe nemumwe ane kodzero yekutora chinzvimbo chaanoda kana kupesana nezvakagoverwa, pakupera kwezvose ini ndinofunga kuti avo vedu vanoshandisa GNU / Linux imhaka yekuti hatidi iyo Software kuti ivharwe.
1- Icho chirongwa cheyakavhurwa chakanangidzirwa chete pakuva rudzi rwekusanganiswa nekubatana
2- Kuva purojekiti yekuvhura, hazvireve kuti chirongwa ichi chinogona kuchinjwa nevamwe sezvavanoda, mune ino nyaya, canonical inogona kutyora api pese painoda uye hapana chingaitwe.
3- Mumwe anotsamwa, nekuti wekutanga akareva nhema, akabva anyepa zvakare achiti wayland haiite zvinoitwa nemir (uye kana ikaita zvese uye nezvimwe) uye pakupedzisira nekuti yatora nharaunda yese yanga ichishanda muwayland kumapenzi, kde, gnome, e17, gtk, izvo zve qt nezvimwe,
4-Kana iwe ukaichinjisa paunoda, pamwe madhiraivha akavharwa aisazoshanda xddddddddddddd
Ini ndanzwisisa - uye zvakatoipa - kuti Mir inongova Wayland yakadzoswazve kutsigira vatyairi veApple uye haifanirwe kumirira Wayland nemadhiraivha ayo - kuitwe - kuti vakwanise kusvika nenguva nefoni yeUbuntu, kubvira Xwindows ye MaARM GPU anononoka.
Sezvo Nvidia ne AMD ye x86_64 isina madhiraivha eApple, Intel iri yemahara yaigona kuchinjika zviri nyore uye zvingangoda kushandisa imwe nzira asi yakaderera mashandiro emahara Nvidia ne AMD iwo.
Saka pane desktop Ubuntu ingangopa Wayland zvirinani sarudzo, asi pamafoni uye mahwendefa ivo vanoda MIR, uye sezvo vachidaro, kana vachigona kuita basa riitwe pa desktop vanozvichengeta.
Wayland iri kutora nguva yakareba, uye zvakatora chinguva chiduku kutanga kuteedzera zvinhu kubva kuMIR sekugamuchira madhiraivhi eApple, nechikonzero.
Dambudziko nezvose rinobva kune egos yeumwe neumwe, iyo, uye ngatitendei, Linux yatove bhizimusi hombe, uye mainjiniya eWayland kana MIR ikabudirira vanofanirwa kutsvaga rimwe basa, uye kana rikafambira mberi vanozove kururamisa kusakwanisa kwavo.
Kugamuchirwa kumakwikwi - kubatana - kuti MIR kodhi ndeyeGNU, kunyangwe munzira idzo vanhu veWayland vakanzwa kutengeswa, asi Ubuntu nemaforogo mazhinji, vamwe vakabudirira vakaita seMint havanzwe kutengeswa pakupedzisira, kuoneka vachiri kunyengera
ndizvozvo, haugone kutaura zvirinani kana kupfuura
Ini handinyatsozvinzwisisa. Kana Canonical ichiita "x" shanduko kuUbuntu, vanogara vachizvitsoropodza kuti "inongofunga nezvevashandisi vayo, kwete yeavo mamwe ma distros", iyo "iyo inokanganwa ndiani akaita kuti Ubuntu ivepo", iyo "nguva dzese painotaridzika kunge OS X ». Kunyange zvakadaro, zvinogona kuenderera uye zvisati zvapedza.
Ini ndinobvumirana pane akati wandei eaya mapoinzi, uyezve kuti vazhinji vashandisi veUbuntu vanonyanya kunyanyisa, asi usapfuure kana. Semuenzaniso, apo Manjaro (ini ndinofunga ndizvo zvazvinodaidzwa) vakasarudza kusiya Cinnamon nezvose izvo (zvirinani verenga chinyorwa chakaburitswa pano), pakanga paine zvichemo zvisingaperi uye kuzvidzwa kuGNOME, nekuti imhosva yavo uye blah blah blah.
Saka, seCinnamon ikozvino ichave, neimwe nzira, yakasarudzika kuMint, hapana munhu anoti chero chinhu nezvazvo, kunyangwe hazvo yaigara ichifungidzirwa senzvimbo yakasarudzika yedistro iyoyo, zvisinei nekuti inogona kuiswa mune vamwe.
Sezvandambotaura pakutanga, handisi kuvanzwisisa.
Uye handina kushandisa Ubuntu kwemakore, ini ndinojekesa.
ndeyekuti nharaunda hachisi chinhu chinobva musimboti we gnu / linux, yega yega inoshandisa iyo yainoda, nekuti haina kukanganisa kubvisa, asi graphic server inofananidzwa nekushandura kernel.
Kunyangwe Ubuntu ikachinjira kuBSD kana kuita forogo yeOpenSolaris (kutora muenzaniso wakanyanyisa), ini handioni dambudziko, vangadai vasina kukanganisa chero nzira pfungwa ye "mahara software", hongu, sekureba sezvo marezinesi emakwenzi akataurwa aienderana nesoftware inoshandiswa mudistro, yandisingazive.
Hongu, ndinobvuma kuti pakanga paine zvirevo zvekuti Canonical inokanganwa sei nezve vashandisi nezvose izvo, asi ichokwadi kuti rusununguko rwekuzviita rwuripo, ruripo uye rucharamba ruchiripo.
kana zvakaitika kune bsd hapana matambudziko. nekuti hapana aizopa rutsigiro rwehumwe ubuntu kunze uko, uye vatyairi vanogadzira vaizoramba vachitsigira linux kunge hupenyu hwese xDDDDDDD
Kutevera pfungwa yezvakataurwa, uye uchifunga kuti ndiwe munyori wepositi:
Kana iwe uchinzwa kuda kuita MIR hapana matambudziko. nekuti zvisinei nekuti ubuntu huripo sei, vatyairi vanogadzira vanoenderera vachitsigira linux sehupenyu hwese xDDDDDDD
Kukumbira ruregerero pamberi, zvimwe nekutora yako sehwaro uye nekuchinja uye kuifumura munharaunda zvakasununguka, iwe unogadzira imwe yekudyira inogutswa nemafungire angu uye vamwe vashandisi veUbuntu
zvisiri izvo zvachose, iyo kenel chimwe chinhu chakadzama kupfuura graphical server uye ichifunga kuti kana ubuntu ikaenda ku bsd, yaizorega kushanda kuzviuru zvepc munyika, yaisazowana rutsigiro kubva kune chero munhu.
Iyo inyaya yekuvimba nekutendeseka!
FlameWar mundiro yesirivha ... Ichi ndicho chimwe chezvinhu nei Ubuntu, zvirinani kwandiri isingakwezve kutarisa kwangu zvachose ... Kwandiri, ndinoramba ndichienderana nenhau dzaDebian naSlackware, Ubuntu atosiya. zvakawanda zvingadiwa ...
Mariano O. akadaro
Chinyorwa ichi chinoratidza kuti Ubuntu yakakunda pane izvo vamwe vagara vachikundikana zvinosiririsa nekufunga semunyori wenyaya.
Pindura Mariano O.
ubuntu hwabudirira ..., ehe, ndosaka munhu wese achiishandisa
Dai isina kubudirira, zvaisave nebasa kwauri kuti ivo vanoita graphical server sezvo yaisazokanganisa chero munhu.
zvine basa kwandiri! nekuti zvinondibata kuti ndinoshandisa Gnu / linux 🙂 uye kwete ubuntu
uye zvinokubata sei zvakanyanya? hauna wayland, gnome uye tsvuku ngowani? Zvakanaka, zvishoma ruvengo uye zvakawanda iwe unotonhorera
Dai iwe wanga waverenga iyo tammux chinyorwa, iwe ungadai usiri kubvunza izvi. Asi sezvo iwe usina, ini ndinokunyorera iwe chakanyanya kukosha chikamu:
Zvakajairika kuti vagadziri vabatwe, ivo vanofungidzira nyika, ipo nharaunda chete inokwanisa kumhanyisa mir kubatana, uye zvimwe zvese izvo zvisingade kana kufanana kubatana, isu hatigone kushandisa nharaunda ine yakavharwa mutyairi rutsigiro?
kufungidzira dzidziso hazvireve zvinhu chaizvo
Ini ndinongofungidzira zvinotaurwa ne kde uye gnome devs, hapana chimwezve 🙂
zvinongoitika kuti gnome uye ngowani tsvuku zvinofambidzana, zvakare, kana ukasashandisa ubuntu zvakanaka kwauri asi rega kupomba mabhora ako, hatishoropodzi KDE, fedora kana chero chaunoshandisa, namatira nacho uye usiye zvimwe kana sekutaura kwavakaita murwiyo: rarama ufe
[quote] zvinyoronyoro gnome uye tsvuku ngowani zvinofambidzana, zvakare, kana ukasashandisa ubuntu zvakanaka kwauri asi rega kupomba mabhora ako, hatishoropodzi KDE, fedora kana chero chaunoshandisa, namatira nacho uye siya iyo kune vamwe kana sekutaura kwavo murwiyo: rarama uye ufe [/ quote]
Ehe, ini ndinonamatira nayo, uye ne kde, uye ne e17, asi sekureba sekunge mumwe munhu achiedza kumomesa iyo gnu / linux nyika pane zvido, ini ndinozvitaura iwe kana uchizvida kana kwete.
kazhinji kusataura nguva dzose iyo linux nyika inobata maitiro evashandisi vayo uye nekutsanangura yako positi: »kuguta nehunhu hwevamwe vashandisi ve linux»
Zvakanaka, sezvo munhu anonwa kubva kuLinux, kana iwe wakadyiswa, shandisa osx xDDDDDDDDDDD
mhinduro imwechete inogona kushandiswa kwauri
haha, wabvisa chirevo changu, mapererwa nenharo ?????
Ini handikwanise kudzima makomendi, chipoko.
Iyo chete nzira yekuwana iko kurembera kweCanonical iri neimwe yakajeka imwe nzira kuUbuntu. Zviripachena hapana imwe yemushandisi-kekutanga-nguva, uyo anotsvaga kurerukirwa uye chirongwa chakasimba kumashure, icho chisinganyungudike pakutanga shanduko. Nekambani yakasimba kumashure uko hakuna yakawandisa: Fedora, mubhedha wakawandisa bvunzo kana OpenSUSE, yakanyanyisa kuomarara pamamiriro epamba. Mamwe ese mapurojekiti evashoma vanofarira, vanogara vaine njodzi yekuregera kana kunetsekana kuisa uye pamusoro pezvose, gadzirisa. Nezuro ndakaedza kuyedza kwangu kwegumi nematanhatu kusamisa Ubuntu, Antergos. Ini ndinoona kuti haina kana chakaiswa seyakajairwa…. saka ndinofungidzira kuti post-kumisikidzwa inofanirwa kunge iri nhamo. Ini handisi kureva zvimwe zvirongwa zvakaita seLibreOffice…. Ini ndoda kusarudza kusarudza zvandiri kuda kuisa…. asi kuzvinhu zvakaita semapakeji kuitira kuti purinda ishande, kana wifi, kana kadhi reTV…. wozozvimisikidza…. uuuufffff. Izvi ndizvo zvakapihwa naUbuntu: chirongwa chine mukana mushoma wekunyangarika uye nehurongwa hwekushandisa kubva pakutanga. Nhasi izvi zvinongopihwa neavo vanobva kuUbuntu pachawo…. kunyange isina Canonical kumashure. Ndakaedza chinenge zvese uye ini ndinogara ndichidzokera kuUbuntu nekuti matambudziko anogara achiguma uye ndinogara ndichiguma ndichinetseka paconsole, chimwe chinhu chandakanga ndakanganwa neBuntu. Fedora ndicho chinhu chepedyo…. asi ini handifunge kuti zvairehwa kugadzikana. Arch yakagara ichifarira RR asi zvinoenderana nenharaunda yevanofarira, ini ndinofungidzira kuti yakanyanya kunetsekana kupfuura Debian.
Zvakanaka, ini handizive chokwadi, izvo chaizvo zvine musoro, ini ndakaisa linux chakra kushamwari mbiri dzaisaziva chero chinhu nezve linux, uye nhasi ndiri kuvaona vakanyanya kufara vachishandisa kde uye chakra, uye ivo havazive iyo chokwadi zvakanyanya, asi ivo vanokwanisa kumisikidza zvese ivo pachavo, senge iwo theme ye printa kana wacom piritsi.
Kwandiri kune dzimwe nzira huru kuubuntu, senge openuse, pclinux os, kunyangwe sabayaon pachayo (iyo inosimudza inopa otomatiki uye iri nyore nyore) nezvimwewo, izvo mushandisi akajairika anogona kushandisa. Zvinoitika ndezvekuti ivo havana mari yekuzadza internet nekushambadzira.
Ini ndinogona kukuudza, ndisingatyi kukanganisa, kuti Linux Mint chirongwa chinogona kurarama pasina Ubuntu. Kune zvimwe zvekugovera zviri nyore kushandisa: Manjaro, Chakra, Neptune OS ... zvakadaro. Ubuntu haisisiri yega inopa "chimwe chinhu chiri nyore" kumushandisi.
Ndiri kutaura newe kubva pane zvakaitika kwandiri. Ini ndinoda Gnome uye ndinoda Debian uye hapana kana imwe isingandipe dambudziko. Chete muUbuntu ivo vashoma.
Nezve Mint…. Handifunge kuti unogona kuenzanisa simba reCanonical uye kuronga kwayo. Ini ndinofungidzira kufananidzwa neCanonical kune chete ma distros saFedora.
Tanglu mutsva asi anovimbisa Debian + KDE
Asi ini handifunge kuti iri kubuda izvozvi. Wakatarisa kuSolydXK? NdiDebian + KDE kana Debian + XFCE
Linux Mint Debian muenzaniso wakajeka
Ini ndinofunga Mint yatove kupfuura chirongwa. Iyo Debian Edition (LMDE) yanga ichikura zvakatsiga, yakareruka kupfuura iyo yakavakirwa paUbuntu uye, kunyangwe ichivakirwa pane isina-kugadzikana distro (Debian Kwayedza), inoshanda zvakakwana. Ndanga ndichiishandisa kweinopfuura gore uye ndinofanira kureurura kuti yakandiunzira matambudziko mashoma pane Ubuntu uye nekugadziriswa kwayo zvachose.
LMDE yanga iri pakumhanya kwayo kwemakore, asi ziva kuti nehurombo yaive nguva dzose kumashure kwechikwata cheLinux Mint, saka havaipure sezvakakodzera, izvo zvakakonzera kushungurudzika kwakanyanya kwevamwe vavanoenda pamusoro pekutarisira pasi kana muchokwadi haisi yakaipa distro futi.
Ndisati ndaona zvisina kunaka kuti iyo Mint inosarudza kuve yakavakirwa paUbuntu pane iyo Debian nekuti nenzira iyo yavakachengetedza basa, asi ikozvino ndichifunga nezvayo zvakanyanya ndinofunga zvaizove zvirinani dai iyo hombe yaive yakavakirwa paDebian uye (ye semuenzaniso) ivo vaive neyechipiri edition yakavakirwa chete paUbuntu's LTS kufadza vazhinji vevashandisi vayo, zvinova izvo zvavanowanzoedza.
Kune mavhezheni mazhinji ini ndakaedza kuzvinamisa kubva kuUbuntu uku ndichigadzirisa yangu versionitis. Ini ndakatomboedza Mint…. asi hapana. Kunyangwe zvandaverenga, Ubuntu ichiri nhanho imwe kumusoro mupfungwa yekugadzirisa hupenyu hwako. Ini ndinogara ndichiwana mashoma matambudziko muUbuntu kupfuura mune chero imwe.
Asi iyo yekubatana nyaya, iyo nyowani graphical server, tambo yekuvandudza iyo dzimwe nguva yakajeka uye dzimwe nguva inovhiringidza, nezvimwe ... .. uye pakupedzisira sarudzo dzemakore apfuura senge yakachipa Steve Jobs .... Zvinondifambisa mukuyedza kwangu kukanganwa Ubuntu.
Parizvino ini ndichienderera mberi neUbuntu GNOME uye tariro yangu yazvino ndeyeGNOME OS yandinotarisira ndeyechokwadi yakavakirwa paDebian, Antergos asi yakawanda currada yakamboiswa kana kunyange yakachena Debian kana ikatora shanduko inokurumidza kana RR.
Iri zhizha, neimwe nguva shoma ndinogona kuburukira kune iyo nyowani Debian.
Triana Tuxedo akadaro
@jose, ndinozvizivisa newe, ndiri kutsungirira Ubuntu Gnome nekuda kwenyaya yekunyaradza, asi maitiro eCanonical pakupedzisira anozoita kuti ndisiye Ubuntu
Pindura Tux De Triana
Handibvumirani. Ndakaisa Fedora pabhuku rehanzvadzi yangu, iye haana kana chaanoziva nezveLinux. Zvakare, kune inozivikanwa desktop, ini ndakaisa yakavhurikaSUSE neGNOME uye pakange pasina kunyunyuta kumwe chete.
Rigid openuse yedesktop nharaunda?
Asi unozvitora kupi izvozvo, kana zviri zvinopesana.
Chii chiripo kuverenga.
Ubuntu yakavakirwa paDebian, inova iyo piyona wechokwadi wepfungwa yekureruka kwekushandisa mune yega pfungwa yeshoko (desktop, maseva, ARM zvishandiso…). Zvakare, ini ndakatanga neMandrake 9, iyo yandakaodzwa mwoyo munzira yayo yekugadzirisa ayo .rpm mapakeji ayo andakazopedzisira ndadonha pasi akaitwa naDebian (yekutanga vhezheni yandakashandisa ndeye 5 inonzi Lenny, iine dzimwe hiccups idzo Squeeze yainge yagadzirisa mu PC mashandiro edesktop), asi zano rayo rave rakafanana uye ini ndakaedza kutsvaga distro yakafanana neDebian iyo yakatorwa kwariri, asi ini ndakazopedzisira ndadzokera kuDebian (Thanks Ubuntu nekushandisa Sid mukuburitsa kwako kwazvino uye Kuedza mune yako LTS), Pamusoro pezvo, mamwe maratidziro akadai seSlackware neCentOS ane hwaro hwakaenzana, asi havana vanhu vazhinji nevateveri nevadi fanboys kupfuura yaDebian (Thanks, EsDebian yekugadzira zita rakaipa revashandisi veiyi yakanaka distro, asi Ini ndinoda kuteerera kunhengo dzeFSF nekuti zvirinani ivo vanoziva kutsigira hwaro hwayo).
Kune vashandisi veUbuntu, ini ndinokurudzira kushandisa iyo LTS, sezvo ivo vari angangoita akawandisa azvino kupfuura akajairwa Rolling Anosunungura.
Ini ndakaisa yakavhurikaSUSE yemumwe bhudhi waanoshandisa kuona mabhaisikopo, kufamba munzira, senge media media, uye anga anayo kwemwedzi miviri uye anofara, uye aingoziva windows uye chinhu chidiki. Chinhu chakavhurikaSUSE chakanyanyisa, handizive chaizvo zvaunoreva.
Ehezve, iro zuva Canonical inogadzira chishandiso senge yakavhurwa Kuvaka Sevhisi, kwaunogona kuumbiridza pasuru yeiyo distro yaunoda, isu tichataura. Ini handichazombotsigira zvakare Canonical nekuti, sezvo ivo vakatarisa pakubata kwavo uye nhare dzavo mumhepo, ivo hapana chavari kuita chemahara software, kusiyana, semuenzaniso, Suse.
Pindura kuna jai
Uye sekutaura kwakaita rwiyo:
Ticha mira kupi?
nemafungiro aya anokuvadza uye asina musoro
ngatipei kuzvininipisa ...
asi hei, ini ndinoshandisa wayland nekuti ini ndinoshandisa Fedora, zvimwe zvese zvidiki.
Pindura kuna Aaron
Ndingati ini handina basa asi chokwadi ndechekuti kana chiri chokwadi, hazvina hunhu kunyepa uye wayland inogona kutorerwa mukana, kana pane chikonzero chakanaka chekuparadzana?
Ini ndinoda mamwe ma distros pachinzvimbo cheUbuntu, uye Kubatana harisi dambudziko hombe, mhinduro ndeyekuisa net, XFCE uye ndizvozvo, izvozvi.
Nei ndiri kushandisa Ubuntu panguva ino? Ini ndakakwenya Arch uye ini ndaida sisitimu yaigona kundipa izvo zvandaizoda mune emergency. Uye nhasi izuva iro.
Kushamisika kuti ini ndawana ichi chinyorwa, ichave iri nguva yekutanga kufunga nezvaDebian.
Pindura kuna Angel_Le_Blanc
Isa Debian yakafanana neArch, saka iwe unotora kubva "kudonha".
Ndizvozvo. Tevera Debian.
Ponte Manjaro ari kunyatso kuita ne arch izvo Ubuntu zvakagadzirwa pakutanga kurerutsa kuiswa kwayo nekushandisa
Manjaro haina kukwezva ini zvakanyanya uye ndinofunga zvakafanana newe. Kukahadzika kwangu chete ndiko kuenderera kwemapurojekiti, ayo neshanduro dzekutanga dzeUbuntu, vasati vakwira kumuzambiringa, vakavimbiswa neBCanonical. Ini ndinotarisira zvakafanana naAntergos.
Ini ndinotenda kuti Ubuntu (Canonical) haizove nesarudzo uye ichafanirwa kuchengeta zvese Mir, Wailand uye xorg munzvimbo dzepamutemo repamberi mune ramangwana kutsigira Ubuntu neUniity, KDE, Gnome nezvimwe.
Chingave chiri chakanyanya kurairwa kuti urambe uchingova mumwe weanonyanya kushandiswa distros.
Zvino, pane mukana werusununguko rwakazara kubva kune mamwe masisitimu e linux. Izvi zvinosanganisira kubvisa chero nharaunda kunze kwekubatana kubva kuUbuntu, ichigadzira yayo yega fomati fomati uye kupinda muWindows, Red Hat, SUSE uye APPLE mune yepasirose yekubhadhara masisitimu .. Kuziva izvo Canonical ichaita ..
Nyore: Ini ndaizoenda kubhuroka uye Valve yaigona kubheja zvakanyanya paDebian / Arch / Mint kupfuura Ubuntu.
Cannonical inofanirwa kuve isingatendeseki kunharaunda yayo irikuita zvese zvavanogona kuchengetedza mapurojekiti akaita Kubuntu, Xubuntu uye mhuri iri mupenyu (Ndingadai ndichiri kushandisa Debian zvakadaro nekushomeka kwayo kusinganzwisisike uye kupfava kwaunogona kuisa iyi distro pane chero chishandiso).
Nehurombo Ubuntu hunogoverwa nekambani uye ivo havapi hanya nezve nharaunda, ivo vanongofarira chete kugadzira mari.
Uye ivo havakwanise izvo ...
Hapana munhu ku [isa pro yako Free Software isingabatsiri sangano] akabvunza maonero angu kana kundibvunza kana yavo distro inoshanda nemazvo pane yangu yakaderera laptop. Ah hongu! Zvinofanira kunge zviri nekuti ini ndiri mudiki uye handisi wekutanga ...
Izvo hazvina chekuita nazvo. Fedora haina kutsigirwa nekambani here?
Ini ndinoshandisa ubuntu nekuti ini handina sarudzo uye ndakaiisa kunze kwekusaziva. Mumwedzi mishoma zvave pachena kwandiri kuti Canonical inozvitenda pachayo kuve Apple uye inoshuvira kuve yakasviba uye yakasviba kupfuura iyo yakatangira. Mhedzisiro yacho ichave izvo zvandakaona ndiri jaya nekuda kwekutsamwiswa kwaJobbs, danho rechokwadi rekudzoka, tekinoroji yepakati zera yaive iko kusvika kweMac.Zvaityisa, kwemakumi emakore isu hatina kuenda kupfuura MSDOS.
Pandinogona, ndichaita kusvetukira kuna Devian ndakananga kunze kwebhokisi, kana linux mint kana kunyange archlinux, ini handidi kutsigira iyi software buccaneer neimwe nzira.
Kuti unzwisise zvishoma pamusoro penyaya iyi, verenga maonero aMalcer anobatanidzwa mukusimudzira chakra: http://ext4.wordpress.com/2013/03/08/mark-shuttleworth-no-sabe-lo-que-quiere/#more-5756
Zvakanaka, ndine urombo asi Xubuntu wangu anoshanda chaizvo kwandiri uye parizvino handidi kuisiya.
Usava nehanya navo. Nhasi vamuka kudivi risiri iro remubhedha uye izvi ndozvinoitika.
Chokwadi Maka achiverenga iyi posvo achazungunuka! Iye anozofunga kuchinja nzira nezvose. HAHAHA. Zvisinei, izvo zvinhu zvinoverengerwa pano.
Ah, ndakanganwa, kufadza mafambiro epositi:
Zvakaipa sei Ubuntu. BU-BU-BU. Zvakaipa sei!
Tarisa uone kuti maererano nehuwandu, sainzi, huwandu hwevanhu, tsika nemagadzirirwo akaratidzirwa kutsigira ichi chinyorwa, avhura maziso angu kuchokwadi saka ndakapisa zvisaririra zvese zvechinhu chisina mahara palaptop yangu. Ndakatanga neUbuntu asi zvakazobuda kuti iyo HDD yanga isiri "yakavhurika Hardware" uye chinhu chimwe chakatungamira kune chimwe ... Btw ndiri kuenda nekuti nguva yangu iri kupera mucybercafé yekuseka ...: C
zvirinani uye verenga pano zvinotaurwa neanti-ubuntu hauzive zviri kunyatso kuitika uye iwe unongotsigira iyo SL nekuti ndeye mahara uye maPC ako akafanirwa nezera rebwe uye kana usingamhanyi kufambira mberi kana centOS, uye haufanire ivo vanomhanyira pavari, saka kushoma dzidziso uye kuwedzera pragmatism kunyangwe ichirwadza uye kana zvisiri, bhadharira kopi ye windows kana OSX
ehe ..., pc yangu ine intel i5 3570k uye nvidia gtx670, uye 8 gb yegondohwe, iri kubva kunguva yematombo, enda unorara pasi ...
Zvakanaka saka zvishoma taliban mupumburu
Zvakanaka, verenga zvinyorwa, shandisa nzwisiso yako kuti unzwisise zvavanotaura wobva wanyora, shandisa nyaya yacho.
Ndakaiverenga, uye ini ndanga ndatonzwisisa zvakakwana, kunyora chinyorwa cherudzi urwu hakusimudzi chikamu cheblog, pane zvinopesana inoidzikisa kumatope, ndinovimba mupiro wako unotevera unovaka
Kana kutaura chokwadi kuri kurwa, saka kubva mangwana ndichatanga kutaura kuti Ubuntu ndiyo yakanakisa muchadenga, kuti hapana chinhu chiri nani kunze kwekubatana uye kuti canonical yakaberekwazve Jesu Kristu, saka uchafara uye sewechitendero, iwe achaombera muponesi wako azere nemufaro.
Kwete, Jesu Kristu sezviri pachena ndiwe, uyo ane chokwadi chizere. Panzvimbo pekutaura nezve maonero, iwe unotaura nezve chokwadi, seicho chega uye chakazara. Cerrazónico kune yakanyanya exponent.
Pindura kune sinoops
Zvakanaka, ndichave Jesu Kristu, iwe unoda kuti ndikuudze chii? XDDDD
Usatombo kunetseka, Mir vanhu vari kushandisa TDD uye zvese zvichafamba zvakanaka, uye Kubatana ichave yechipiri vhezheni yeMinehunt muQML.
Canonical anoziva chaizvo zvairi kuda. IWindows nyowani, asi ichishandisa Linux. Zvimwe zvese zvauri kutaura hazvina basa, nekuti iwe unenge wagona. Ndeipi mhinduro? Vashandisi veLinux vanoshandisa ino sisitimu "rusununguko", rakasiyana kwazvo neWindows kana Mac. Ubuntu haichamiriri rusununguko irworwo here? Zvakanaka, inomira kushandisa uye ndizvozvo. Ini pachangu handisati ndambofarira Ubuntu uye handina kumedza Canonical, nekuti zvese izvi zvakave zvichizivikanwa uye zvichionekwa zvichiuya kwenguva refu.
Icho chidzidzo chezvese izvo Ubuntu zvinofanirwa kunge zvakanaka pa…. asiwo zvese zvakakuvadza. Kunyanya kuzivikanwa kwakanyanya kweLinux neUbuntu ... kune kwakanyanya uye kukura kwequasi-Italian mafambiro mukufarira imwe distro kana imwe.
Ini pachangu ndicharamba ndichishandisa Linux; haichisiri nekuti yemahara kana yekudzivirira kubiridzira kana kutsemura maitiro, ayo ari kuwedzera kunetsa ... asi nekuti ini ndinofunga kuti kusvika padanho rimwe chete, software yakakosha kwazvo muhupenyu hwedu zvekuti haifanire kunge iri yega. Zvakafanana nechakanaka chakanaka.
izvi zvinotaridzika chaizvo linux.
Pindura kuna Gabriel
+1 #isina mutengo
Wataura chokwadi, asi zviriko pano pane mashoma fanboys pano pane ari paMuyLinux neEsDebian (zvaigona sei kuve zvakaora nevateveri uye fanboys munguva pfupi yakadaro!).
Zvisinei, ini ndinobvunza chero chinhu kunharaunda ino kana zvakare kuChirungu foramu yeDebian, Arch nevamwe (nekuda kweruzivo rwangu rwepakati Chirungu, hongu).
wedzera kune izvo trolls
XD. Uye kufunga kuti DesdeLinux ndiyo nzvimbo yangu yekupotera, kwandaigona kuverenga zvirevo ndisingatyi kuona dzakasiyana siyana kutukwa uye troll.
Saka kuti vanhu vanzwisise zvakakanganisika naMir ndinofunga zvingave zvakanaka kududzira zvinyorwa kubva kumusimudziri kwin kwaanotsanangudza zvese zvakapusa.
Ini handinzwisise kukakavara kwese, chaizvo ...
Ini ndinotenda Canonical ine kodzero dzose munyika kumhanyisa bhizinesi ravo sezvavanoona zvakakodzera. Saka zvakajeka. Yako kodhi iripo kuitira kuti chero munhu anoda kuigadzira. Zvakare, kana mumwe munhu akatanga kurwara kuUbuntu, vanogona kusarudza chero eiyo distros mune yeLinux zvakasikwa: kushandiswa kwayo hakusi kwekumanikidza.
Ikozvino zvinoitika kuti Canonical ndi satani nekuti hazviite izvo "nharaunda" inoda kuti iite… tambopenga kana chii?
Zvinotaridza pachena kwandiri kuti Canonical inoda kukudziridza inokwanisika distro kune "asiri-technical" mushandisi, ndiko kuti, kune wese munhu. Rizivise, huya. Uye zvinondipa hunch kuti achaiwana. Ini handioni dambudziko nazvo futi. Chii zvakare, ingave "nharaunda" ichizvida kana kwete, iyo yese Linux zvakasikwa yaizobatsirwa nazvo.
Zvisinei, ini ndinoona kusagadzikana nezveUbuntu kutenderera pano;). Izvo zvinowedzera kuve uine tariro.
yakadudzirwa, hauna kuverenga chinyorwa uye hauna kunzwisisa vatyairi vakavharwa, zvakadaro.
ndimi mega makamboiverenga sezviri pachena
troll uye avo vasingazive kuzviita nemazvo.
Nenzira iyoyo haufambi! Kutsika panofanirwa kuve nekutsvinya uye acidity mumajee avo.
Ini handitsikise chero chinhu, ini handina kana maakaundi maviri ezvo, ndiri mushandisi weUbuntu ndinozviona sendakanganiswa neposvo yako
Zvakanaka, handifunge kuti chingave chokwadi kuti zvinobatsira munhu wese kubva kuLinux. Izvo zvinogona kubatsira nyika yeUbuntu.
Isu tatoona kuti ROTI revanhu vanofunga kuti Linux ndiUbuntu, izvo zvisiri zvechokwadi, Ubuntu iLinux. Ini ndatova neshamwari inoti, "Iine slash kune rimwe divi, seLinux."
Chinhu "chisina-tekinoroji" mushandisi chinhu, kwete chete Ubuntu chiripo, OpenSUSE uye Sabayon vakanakisa distros zvechinangwa icho (kubva pakuona kwangu)
Zvichienderana, asi pakati peVatatu vaMaria vekugadzikana (RHEL / CentOS, Debian, Slackware), vazhinji vangasarudza Debian nekuti Ubuntu inoshandisa akawanda maitirwo ayo sehwaro, zvakare kana iwe uchida zvimwe windowser chiitiko, ini ndinokurudzira CentOS / RHEL ( pamwe neRHEL kana iwe uchida kubhadhara kunyoreswa kwe "yakasarudzika" kuwana kune kwavo kuzorora uye anokosha mablobs).
Ubuntu iri kungobatsira Ubuntu chete. Vanodya nechingwa chavo.
Hunhu husina musoro, hwoudyire, hunyengeri uye kunyange hunhu hweUbuntu chinhu chinovimbiswa nevanhu vese vane njere dzebasa. Ehe, iyo muylinux.com fan base haina kubviswa.
Kubva 2010 izvi zvakaonekwa zvichiuya ... ndinosuwa ndichirangarira vhezheni senge Hardy Heron kana Karmic Koala, iwo andaishandisa nekusimudzira, kuva izvozvi ...
Pindura Kutarisa Kwauri
Juan Carlos akadaro
Hekani! Ndakakuwana uripowo, "Nostradamus." Izvo zvakaitika kwauri nekusashandisa masimba ako panguva iyoyo….
Pindura Juan Carlos
Chokwadi, wakandiwana, ibenzi ripi randakanga ndisiri kuzochinja zita rangu remadunhurirwa uye ndisingataure imwe foramu kuti irege kuwanikwa, handiti?
Hahaha ... pakupedzisira ichokwadi, nyika ihengechefu.
nenzira, kune avo vanoda kuona kufambira mberi kwen kwin in wayland
Ini ndinofunga urikukanganwa chimwe chinhu icho huzivi hwemahara software inokupa iwe, ZVESE RUSununguko kune Window 8 shit, vashandisi vachatsvaga imwe nzira iri nyore zvakakwana kushandisa seyakare yavo inotevera inotevera uye zvakanaka, ndinonzwa kuti iyi ndiyo imwe nzira iri kugadzirwa neCanonical, yakafanana neMac asi neimwe nzira yeku "sununguka" (mukati mayo ambiguity total) kune izvo zvinowedzerwa "miun" (amazon nevamwe), chimwe chinhu chinoshandiswa zvakanyanya nemamwe marudzi evashandisi, kune vamwe vese isu tine izvo zvatinoziva kare, isu tine zvekare izvo zvinotikwezva uye zvinotikurudzira kuti tirambe kuchipa chaiyo kubata kuGNU / Linux, ichokwadi kuti vazhinji vakasara vaine kuravira kwakashata, asi izvo zvatinoziva hazvina kuita
Wagona kutaura. Asi munyori anoreva "rusununguko rwune" rwakaziviswa neFree Software Foundation, umo Cannonical isingaremekedze rusununguko rwechitatu kana rwechina. rusununguko.
Chinhu pamusoro pekusununguka kwakazara ingano. Kune marezinesi (iyi nderimwe rematambudziko makuru aMir).
Zvakanaka, ndinofunga kuti avo vanozoguma zvakashata pano ndezvechokwadi.
Kubva pamaonero edu (kunyanya vashandisi ve desktop linux) Canonical hofori, asi pachokwadi iri padiki diki (mu linux mari yacho haisi padesktop).
Behind wayland kune tekinoroji hofori mukuwedzera pakuve protocol yakanangana nekusimba uye ine MIT rezinesi (kubva pane zvandakaverenga zviri nani zvakanyanya kutengeserana uye zvinowirirana kupfuura GPLv3 ine Mir's CLA)
Mir iri "protocol-agnostic" yakanangana nehunhu chete uye parizvino haina yakajeka michina pamusoro pewayland.
Ini handidi kuti ubuntu iende zvakashata, ini ndakatanga ma adventures angu ne linux muKarmic Koala uye nanhasi ndinoramba ndichida iyi distro, asi handifunge kuti Mir inyanzvi yekufamba. Izvo zviwanikwa zvingave zviri nani kudyarwa kumwe kunhu.
Zvisinei, haufanire kunge usina tariro, pane zvakawanda nekuedza zvakanyanya pachikamu chekuita kuti vatyairi vazvimiririre neiyo graphic server, iyo inogona kugadzirisa matambudziko mazhinji many
Tine hurombo, kutaura uku hakuna kunongedzwa kwauri NayosX XD
Ubuntu yave ingangoita seyakajairika kune vanogadzira software vanogadzira. Software inogadzirwa ichisimbisa kuti inomhanya pane yakadaro vhezheni yeUbuntu.
Ini handidi kuve nehutsinye, asi vashoma vanhu vanoshandisa linux. Uye mazhinji acho anoshandisa Ubuntu. Kana ndichifanirwa kugadzira software yekudyara, (ndinofungidzira kuti ndichazviitira Linux, asi dai ndakazviita ndaizozviitira kuti zvimhanye paUbuntu chete, ndaizongonetsekana nezvazvo) Ivo vane chitoro che software. Chiteshi icho chigadzirwa changu chichatengeswa.
Pano iko kuchema kuri kwechero software uye madhiraivha. Chii chavari kupunyuka muWindows kana kwete?
Yako debian kana archlinux ichaenderera ichishanda nemusununguko software uye mahara madhiraivha. Kana iwe uchida zvakavanzika uye enda kuWindows.
Kana iwe uchida kushandisa zvine hushamwari Ubuntu, kana enda kuWindows. Ndinovimba kuti Ubuntu inoenda kure nekunyanyisa kusanyanyisa uye inosanganisira madhiraivha epamutemo nekumisikidza, uye macompeceti echivigiro nekutadza.
MuArchLinux, ivo havana kana kupatsanura vakasununguka kubva kune veimba software. MuDebian kana vakaparadzana uye zvinoita kunge benzi kwandiri.
Pandev92 haingakanganise mushandisi wangu mushandisi: p
Ini handinetswe nechinhu nezve yako Mushandisi-Mumiriri. Uyezve, ndine godo kuti urikushandisa RHEL (kutaura chokwadi, ndiyo iri padhuze neMS Windows muGNU / Linux).
Chii canonical kana izvo zvandisina basa nazvo kana vakati ivo havatsigire wayland, pamwe vanhu veUbuntu ndivo chete, zvirokwazvo kune varinani vanogadzira, vanozviita kuti vashandise. Zvaigara zvakaita senge ivo vaive vakavakirwa padhibian uye vaishandisa zvakanakisa zvaive naDebian. Zvaigara zvakadaro, hapana dambudziko, haisi nguva yekutanga uye zvirokwazvo haisi yekupedzisira nguva, hahaha, saka haufanire kuita dutu mugirazi remvura. Chinhu chakanakisa kuve nesarudzo uye kugona kusarudza, sarudzo yaunoita kuti zvive nyore, misimboti kana kuravira zvirinani zvine zvakasiyana siyana zvaunosarudza kubva!
Zvinorwadza ndiani anokuvadza Ubuntu ndiyo yega distro iyo inogona kukwikwidza neWindows 7 yekushandisa desktop (Tarisa mafirimu, Tamba, Teerera kumimhanzi, fonera paInternet, nyora neshoko? Mune mamwe ese iwe uchafanirwa kutanga kugadzirisa zvinhu zvausingafanire kunge uchigadzirisa. (Kunze kweUbuntu zvigadzirwa ...)
Zvakadaro. Mahwindo ari pamusoro haha. Fuck icho.
Mmmmm ... Ini handibvumirane, ini handifunge Windows 7, asi iko kwazvino kubhuroka kungave.
Pandev92, nharaunda yedu idanda redhiamiti uye iwe wangobatidza fuse. BHUKU! Ini handina kupedza kuverenga zvataurwa, asi zvinoita sekunge ichave HUGE blast 😀. Ndinokushuvira rombo rakanaka 😉
Ubuntu. Zvinondiyeuchidza nezve windows 8.
Kutendeseka, ini ndakatoona Ubuntu ichiuya ne "vavariro" dzayo yekutonga zvese uye kana ndichitaura nezvese hazvisi chete nepfungwa dzekukunda windows uye mac asiwo software yemahara, hazvishamise kuti shanduko iyi yezvinyorwa yakaitwa sei, asi zvakashata zvakanyanya Pane kugoverwa senge Debian, iyo isingazombosiya pfungwa dzavo uye vamwe vazhinji vakaita saTrisquel iyo icharamba ichiita kubhowa kweUbuntu kwakapandukira zvekuti yakanatswa nesoftware yemahara chete, mafungiro ekambani akafanana neaya Microsoft neApple pane izvozvi zvave Microsoft vs Apple vs Canonical, nekuti nyangwe Red Hat yapinda mukushora kwakanyanya, uye ndiregererewo kukupindura kubva paWindows Vista, asi ndiri kumba kweshamwari yakaomesa hafu uye yakasununguka 't ndaida kuchinjira kuGNU / Linux hehehehe. Mufaro!
Ini ndinokuregerera nechinhu cheWindows Vista, nekuti ndiyo fiasco yangu yandaifarirawo (ndaizoishandisa paCore i7 ine NVIDIA 1.5GB vhidhiyo, 7GB RAM uye iwe unoziva zvese izvo kutapudzika). Nekudaro, Trisquel haisi yega GNU / Linux distro inosimbiswa neFSF, asiwo mamwe maforogo akafanana neParabola, iri forogo yeArch ine 100% yemahara software.
Kana iri yaDebian, ichave ichiri yakanakisa GNU / Linux distro kunze uko, sezvo iri yechipiri. distro yandakazvizivisa chaizvo kune iyo GNU / Linux zvakasikwa uye ikozvino ndiri kutaura kubva kuPC yangu neDebian Oldtable (kusvina) kuti inoda nekukurumidza hofori F2 inoda kuisa Wheezy neXFCE (Ndiregererewo kana mushandisi wangu asingatauri ini kana ndikashandisa chaizvo Debian, asi ndiri kutaura kubva kuGoogle Chrome 5).
Ngatione, ngatione kana ndainzwisisa iyo posvo, uye ini ndinotora chirevo chakapihwa kare
«Makambani kakawanda pavanogadzira linux, ivo vanongogadzira iyo .deb package, kana Canonical ichienderera mberi nezvirongwa zvavo uye X kambani inosarudza kugadzira linux ... pamwe zvinongoitira iyo Ubuntu, semuenzaniso Steam inongowanikwa chete. Ubuntu mumapakeji .deb (ndinoreva zviri pamutemo) »
Saka kana ndainzwisisa nenzira kwayo:
* Sezvo ubuntu graphical server iri mukuvandudza, uye zvigadzirwa zvemahwendefa, materevhizheni uye chero chii chinoitika kwandiri chinoshandisa akadaro graphical server.
* Sezvo zvavanobhadharwa zvigadzirwa, ivo vanozonyanya kukwezva kune vatyairi vagadziri, uye izvi, semhepo, zvinongogadzira zveUbuntu.
* Kana tichigadzira chete Ubuntu, isu vamwe tinosara nehurefu hwemhino, isu taizongofanira chete kuwana zvigadzirwa zveIntel.
Ndiruramise kana ndisina kunzwisisa, asi kana ongororo yangu iri yechokwadi, hazvizove zvakakosha kuchinja kugovera.
Zvino, nevimbiso ye ubuntu yekugara yakasununguka uye ichiwanika, hazvizoite here kuti ubuntu iite senge redhat, kugoverwa kwakabhadharwa (chinhu chitsva chauri kugadzira) uye chemahara (chinova ubuntu pasina shanduko sevha yako nezvimwewo)?
Parizvino zvese kufungidzira, sezvo zvisati zvaitika.
Pindura kuna Alf
Kana zororo reLTS shanduro dzeUbuntu dzichienderana zvizere neDebian Stable vhezheni. Ini handinzwisise kuti nei kutaura uku kwakanyanya fanboy.
[sarcasm] Chero zvodii @ pandev92, kana usingabvumirane nesoftware yekudyira, ndinokurudzira kuti ushandise Intel Hardware uye isa Arch forogo inonzi Parabola, iyo inosimbiswa neFree Software Foundation kuburikidza neiyo Project GNU [/ sarcasm ].
sezvo kernel 3.8 ini handigone kubhowa chero distro: / ine intel hd4000 mifananidzo, taura iko kukanganisa, asi zvinoita sekunge kernel 3.9.2 haina kugadziriswa, ini ndinongowana nhema nhema ...
Izvi zvinoratidza kuti Red Hat yaive nechakakosha chikonzero nei yakamanikidzwa kuchengeta iyo kernel vhezheni 2.6.x
Ndiri kuzokutsanangurira iwe, muchiitiko chekuti vagadziri vevatyairi vezvivakwa vakatadza kana kusada kugadzira mutyairi akazvimiririra pane graphic server, zvinogona kunge zviri kuti mutyairi uyu anongomhanya mumirazi, iyo inoshanda chete Ubuntu. Saka zvaisazove mutyairi we linux, asi inenge iri mutyairi we ubuntu, sezvo kazhinji madhiraivhi eApple asingawanzo kuenderana nelinux (iri kuchinja).
Chero zvazvingaitika, kana zvandataura zvikaitika, zvinogona kufananidzwa mukugadzira windows driver inoshanda mu linux…, zvaisazoshanda.
Kwandiri, iwo akafuridzirwa akaenda kumusoro wematikiti $$$$$$
Pindura kuna aldo
Dai ivo "vakakwidziridzwa" (ikambani, mushure mezvose), ini handitombodi kufungidzira huwandu hwetikiti dzakasimudzwa naRed Hat!
Muchidimbu, nharo yako haina chinhu kana kuvimbika mune ino nyonganiso ye Flame akaiswa pamwechete nemunyori weichi chinyorwa: ivo vanorwa pamusoro pehupenzi.
tsime, iwe uri mushandisi wehunhu, kukumbira iwe kusarerekera uye kufunga kune vamwe kwakafanana nekubvunza maquero maonero pane chero imwe sisitimu inoshanda.
Zvirinani Red Hat inoita zvinhu zviri pachena uye usatumira data rehuwandu hweizvo zvinoitwa nevashandisi vavo, Red Hat yakanyanya kukanganisa kambani kubata nezvinhu izvozvo.
Zvinhu zvinofanirwa kuwira pasi pehuremu hwavo (ndinoreva rutsigiro kubva kuna Nvidia nevamwe), ndinofunga kune kusahadzika uye kunyangwe kutya kune avo vakapinda munzira yeWayland, Ubuntu haina kukanganisa Wayland, pamwe akataura zvinhu zvaaifanira 'ndataura nezve izvo Wayland zvaanogona kana zvaasingakwanise kuita, ndinofunga ndiyo yega pfungwa isingarambike uye Canonical inofanira kungwarira nezvazvo. Iye zvino handifunge kuti Canonical ine udyire nekuti inoda kuita zvinhu sekunzwisisa kwayo, kuzvida kwakateerana chete kana ikasagovera zvigadzirwa zvayo nenharaunda mushure.
Pindura kuna arianfornaris
Kana iwe usingavagovani, ndeipi nyaya, kunyangwe kunyangwe kuigovana isina kesi nekuti zvigadzirwa zvetsika (Ubuntu-> Mir-> Kubatana)
Ini ndinofunga Mark atove kufinhwa nefilosofi iyo yakapa hupenyu kune ino distro >> http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(filosof%C3%ADa)
Kutaura kuti Ubuntu iri kuramba ichiparadzanisa Linux iri rudzi rwe kuseka apo iyo yose Linux nyika iri mega-fragmenting, puff
Pindura kuna Ultros
Mahara software, kana kana tichida kurerutsa Linux, yakagara iri, ngatitarisei nayo, "hure rakakura." Canonical haina kana chaakaita kunze kwekumisikidza yega lupanar. Kana akanaka kana akaipa, nguva ichamutonga, asi pfambi ndedzake uye anovapomba pese paanoda.
Wese munhu anoziva kuti kurwisa Ubuntu kuri mainstream, distro isina iyo vazhinji nhasi vangadai vachiri kuvhura nekuvhara windows. Sezvavanotaura, "Simudza makunguwo ubvarure maziso ako."
iyi mhinduro yakajeka uye ine nharo, unobvumirana zvachose newe +1
Unokudza zita rako remadunhurirwa
Zvimwe wakakahadzika? asi troll x troll = troll ^ 2
Kana ivo vanovenga vanorova vashandisi neFedora kana Suse ne openSuse nekuvaita vakavanda BetaTesters kubva kumasystem avo ekutengesa, izvo zvinoshamisa uye hapana munhu anoti chero chinhu.
Asi kana Ubuntu ikafunga kuenderera munzira yayo zvinoita sekunge denda redenda rakawira pasi.
Muchidimbu "Vavengi Vachavenga".
Pindura kuna DevillTroll
Zvakanaka kuti distro inozunza nyika yeMAHARA SOFTWARE zvakanyanya.
Kwemakore mazhinji, sekutenda kwakawanda, ndakaedza kugoverwa kusingaverengeki uye chokwadi, chokwadi, ndagara ndadzokera kuUbuntu.
Ini pachangu ndakarwara neArch uye kurodha pasi kwayo kusingaperi, kushaya hanya kwenharaunda yeDebian nekusazvibata kwavo kune vashandisi, shanduko inogara ichiitika uye kamwe kamwe yeChakra, kukura (kusabatsira) kweSabayon software, kunonoka kweLinux Mint zvichingodaro. iyo inoneta mushandisi akajairika.
Kutaura makore mashoma apfuura neshamwari, isu takataura kuti kuisa Ubuntu uye kuishandisa kunotora pasi pemaawa maviri chete, kana iwe ukaisa pane komputa nyowani, zvinonyatso kukuziva iwe kana zvisiri zvese, chikamu chikuru cheiyo Hardware. Iwo mamwe ma distros anokusiya iwe nepakati, iwe unofanirwa kurwira kugadzirisa mutyairi kana mabhatani eiyo Fn kiyi (ndiani asina kupfuura?)
Zvakanakisa pane zvese izvi, chinhu chinonyanya kubatsira chandinoona ndechekuti mukati menyika yeSL tine huwandu husingaperi hwemikana yekushandisa izvo zvinotipa chipo.
Nhasi ndinoshandisa Ubuntu, yangu nyowani notibhuku inozvikoshesa kubva pane zvese zvandakaedza ndiyo yaive yakaoma kuzivikanwa zvakanyanya. Mangwana pamwe ndichaisa imwe distro uye ndichiri kufara, uye semushandisi wekupedzisira usayera kana iri Wayland, Mir, kana murume akwegura Xorg. Chero bedzi ichishanda, gamuchira!
Murazvo uye chipenga chekuti zvakanaka here kana kuti zvakaipa… ndinofunga kutambisa nguva, vanababa. Maonero angu ekuzvininipisa-
Mune mawonero angu, munhu anonyanya kufarira kusimudzira kwevatyairi haasi Canonical kana RH. Kwandiri zviri pachena Valve. Pakupera kwezuva, mifananidzo mbishi inoshandiswa kutamba zvakanyanya.
Ini ndinofunga ndakaverenga nguva pfupi yadarika kuti kunyangwe Blizzard yaizo buritsa WoW mutengi we linux. Ndinokuvimbisa kuti kana Valve neBlizzard vakagadzira Linux nvidia vachazviita, uye pamwe ATI futi ...
kuuraya makonzo akadaro
Iyi posvo marara…
Pindura kune ratakill
1 - Kuti kuve nekushambadzira panofanirwa kuve nemhiko yekuvimbika.
2 - Kuti vanhu vaviri vashande pane akasiyana mabudiro anovhara zvakafanana kuda harisi dambudziko. Kana kwauri chiri chikonzero chekushoropodza, vangani vamwe vaunofanira kushoropodza?
3 - Dambudziko hombe rezvinyorwa hazvisi zvekutaurirana, asi chisarudzo chavo, havana KUSVIMBIRA chero chinhu, kune mumwe munhu hongu? Iyo wayland chinhu hachisi vimbiso, ini handidi kutora zvakakomba kambani inoti "Isu tinovimbisa kuisa kwakadaro budiriro" uye kana ikasazadzikisa zvaunoda?
Kune vamwe vese, ndingadai ndaifarira CANONICAL kubatana newayland, asi zvakadaro.
PS: Kambani haina HUNYU kana HUNHU, vanhu vanoita ...
Kune vanhu vazhinji vanoshanda mune canonical uye vanotsigira mahara software zvakanyanya, vachiti Canonical izvi, Canonical izvo, zvinosanganisira ivo ...
Ndatenda nekundirega ndichiverenga, yakanaka kwazvo posvo.
Zvinoshamisa izvo zvinodzikira nenyaya idzi. Nhasi hazvigoneke kutaura nezvezvimwe zvinhu, ndeyekunyanyisa kunyanyisa, kunyangwe zvitaurwe, kana zvisiri zvekutsvoda mbongoro yeanoenderana "Mwari", bato rakatogadzwa.
Zvisinei hazvo zvinotsanangurwa, zvataurwa uye kunyangwe zvichitaridzwa zvakanaka, mhedzisiro inogara yakafanana.
Ini ndinofunga ichi ndicho chinyorwa uko mamiriro acho akatsanangurwa zvakajeka, zvinhu zvisiri kuitwa nemazvo, ndizvo zviripo uye nezvatichafanirwa kubata nazvo, vese avo vanoona zvinhu neimwe nzira uye vamwe vanotya kubva kune rimwe divi , vakadai sevaya "vakapenya" vachitarisa kubva mukati uye avo vari ivo vanonyanya kutambura nemhedzisiro kana zvinhu zvikapera sezvinoita sekuguma.
Zvakafanana nezvandinogara ndichitaura, zvakanyanya, kuoma kuwana pfungwa dzepfungwa muLinux nyika nguva pfupi yadarika.
Kana vakavimba zvakanyanya paSuttleworth "budiriro" uye "hunyanzvi", ndinofunga zvinhu zvatove zvisizvo. Chii chinoita tsika software? Kubva nguva dzose, chii chakatora mukana weyakavhurika sosi nharaunda uye chisina kudzosa chero chinhu? Ehezve, Ubuntu i "Linux yezvinhu zveSubhuman" vasingade kuumbiridza chero chinhu kana kushandisa koni; kwete kuti vape kana kuvapa yakajairika graphic server (uye ndiani anoda kuti vaenzanise software? yei? yeApple nyowani? hahaha). Chii chinonzi Ubuntu iri Windows nyowani? Kwenguva yakareba muchokwadi (ivo vaida kuve nyowani Mac OS, asi Kubatana kunotyisa zvekuti hakushandiswe nambuya vaSuttleworth, uyo akaisa Gnome Classic nekukurumidza sezvaaigona saka ingori kutevedzera kwaRedmond) Isu kuchema semafini nguva dzese Linux vatambi vasingakwanise kumhanya yavo diki mitambo inodiwa nemavara avo ekare kubva pagumi rapfuura nekuti pane yakaisirwa partition yavo neWindows 7 piratota kuti vagone kuenderera vachitamba mabhuru avo, usaitwe. Iyi Pandev92 kana yakaipa, inosetsa kwazvo.
XDDDDDDDDDDDDDDDD * ROFL »XD
Canonical inoita kunge inokanganwa kuti yaive nharaunda yakaita kuti ive huru, pasina rutsigiro renharaunda haizosvika kure.
Pindura kuna artbgz
Kuita vana usarwa! izvi hazvisi VERY UBUNTU! HEH. zvakakomba, usakanganwa yakazvimiririra kambani iri PRIVATE KAMPANI! Uye ini handina kuona wekutanga uyo anofarira kupa kunze kwekugamuchira mibairo yemakanoni uye zvinomufadza mukukunda pamusoro pesuse, ngowani tsvuku uye kunyangwe pamusoro peMicrosoft pane izvo zvinogona kuitika kunharaunda. Zvatove pachena panguva ino mafambiro ese aya akajairika uye hazvingashamise kuti rimwe zuva ubuntu rimwe windows kana osx zvimwe. Saka dzikama.
Ivo havadi kushandisa wayland kana xorg kana chero chinhu chiri munharaunda, nekuti NDIYO PEO YAVO, VACHAONA ZVAVO ZVAVO, VACHAONA KUTI VANOGADZIRA SEI uye KANA VACHIDA KUTI VASIYE VACHIITE! chimwe chinhu chakataurwa naVaLiuns nguva yadarika NDINOZIVA….!
nharaunda ichapona, haizove magumo egnu / linux, uye ini ndinoti ini ndinoshandisa Kubuntu uye chinobva kune debian.
Ko kana ndikaona ichisemesa ndiyo nzira yekurapa nharaunda, senge zvinotaurwa nevekupedzisira chirevo, chimwe chinhu senge (zvakanaka, ndinochinzwisisa), enda kushit ... handichadi ivo uye ini handidi kwauri , Ini ndato shandisa zvese zvaunoda ... chii kushinga
Chii chinofanira kuitika ndechekuti zvishoma nezvishoma nharaunda inofanirwa kufuratira Canon sezvavanoita izvozvi (kubuntu, lubuntu xubuntu ... rangarira? Uye ndiko kupera kwedambudziko.
Canonical inogona kuita chero chainoda, chero chainonzwisisa, chero chinobuda kunze kweMweya Shuttleworth mweya. Zviri kwatiri isu vashandisi kusarudza kuti zvirongwa zvavo nezvinangwa zvichabudirira here kana kwete.
Ubuntu haisi GNU / Linux, uye hainawo GNU / Linux Ubuntu. Rangarira kuti Ubuntu isina Debian hachisi chinhu, uyezve kunyepedzera-kugovera kunobva kwazviri, asi pane dambudziko riri chairo: Ubuntu ichiri chirevo che "wese asingazive" kuti chii GNU / Linux, kana iwe uchiti Linux, iwe unoti Ubuntu, uye kana zvikaita kuti zvinhu zviwedzere, vagadziri vanotenda zvakafanana, isu takamomoterwa.
Kana Intel, AMD, NVidia, vakangozviisa pachavo kuti vatsigire uye vakoshe kuna Mir, basa reXorg kana Wayland raizonyanya kunetsa. Kunyangwe zvakanaka, ini ndinonzwisisa kuti Mir isina Wayland hachisi chinhu. Zvisinei.
Ndinoshuva kuti vazhinji vashandisi veUbuntu varege kushandisa iyi distro, nekuti ndiyo ingave nzira chete Canonical yaizoisa musoro wayo munzvimbo yayo uye kurega kufongoresa zvakanyanya. Zvakanaka, ivo vanoda kuita mari, zvakanaka kana iri kambani, asi usauye kuzokanganisa hupenyu hwedu.
Intel iri kuseri kwewayland uye AMD kana nvidia havasi kuzotsigira imwe yadzo munguva pfupi iri kutevera, sezvingabvira uchafanirwa kushandisa mahara madhiraivha kwenguva yakareba, kunyange ndichifunga kuti kugadzira madhiraivha eMir kana wayland kunofanira kuve nyore pane X.org.
Zvakanaka, ini handina kukwanisa kukuudza nekuti ini handisi mugadziri. Ndinovimba iri harisi dambudziko, nekuti kana ukasashandisa Intel, kanganwa nezve AMD kana makadhi eNVidia.
Sezviri pachena pave paine nekuedzawo kudivi kusimudzira yakazvimirira giraidhi server madhiraivha. Iyo ingave iri nhanho huru kumberi.
sezvo ini ndichiona kuti iwe unoshandisa Debian ini ndoda kuziva kana iyo Intel HD4000 inoshanda nemazvo mune ino distro
Ini pachokwadi handina kukwanisa kukuudza. Chipset yangu handifunge kuti ndiyo yepamberi.
Kushanda kunoshanda, asi ini ndinogara ndichikupa zano kuti ushandise kuyedza, kweiyo Intel hd4000, nekuti ivo vanowanzo gadziridza neiyo nyowani kernel ...
Ndatenda, ndichave neimwe munguva pfupi uye ndoda kuzokwanisa kuenderera nedebian
Fani waMark akadaro
uhhh! uye mweya weiyi hurukuro yose wakapfupikiswa mumutsara mumwe naElav mukuru "Ndinoshuva kuti vashandisi vazhinji veUbuntu varege kushandisa iyi distro, nekuti ndiyo ndiyo nzira chete yeCanonical yaigona kuisa musoro wayo munzvimbo yayo uye kurega kufongoresa zvakanyanya"
shanje…? godo chii chinonzi ubuntu? nhau dzakaipa kune wese munhu anoda kuti ubuntu atadze, vashoma uye vazhinji vanozouya kuubuntu, nechikonzero chiri nyore, kushungurudzika kunogara kuripo kuri kukonzerwa nemawindows pakati pevashandisi vayo uye kuti iyo ubuntu ndiyo yakanyanya kugovaniswa uye ndiyo chete inokwanisa kukunda moyo weavo vakatama kubva kurima nyika yeMicrosoft. Ubuntu inongowira murudo 😉 zvinokuvadza chero ani anorwadziwa
Pindura fan waMark
Shanje negodo reUbuntu? Hahahahaha ... Usandiseka. Chii chandinacho kugodora Ubuntu? Kubatana? Mir? Ubuntu Runhare OS? Nekuti hapana cheizvi ini chandinoda. Chekutanga pane zvese, ini ndinoshandisa Debian, iyo isina kana chinhu chekugodora Ubuntu, kunze kwePPAs, dzavasina nekuti ivo havadi uye zvinopesana nekugadzikana uye chengetedzo. Ini handishandisi GNOME, saka handina hanya neUbatanidzwa, nekuti kunyangwe ini ndichifarira yavo "isu tinoteedzera Mac" uzivi, mukuita inononoka neLens yakawanda. Mir? NaXorg ini ndasara ..
Handina kutaura kuti iwe unotora kubva kune godo reUbuntu, asi nekuti nzira chete yekuti Mark azive kana ari kukanganisa kana ari munzira kwayo zvinoenderana nemaitiro evashandisi vake, kunyangwe paine vateveri vakawanda pasi rino, kuti kunyangwe kuve Ubuntu kwakaipisisa kugoverwa kwamboitwa, havazombozviziva uye kuramba vachizvishandisa nekuti vanofunga kuti vakakosha.
Ndiwo maonero angu ndisati ndadya masikati.
Fernando A. akadaro
sezvo iwe usina chaunochiva ubuntu. Elav, vane mazana emamwe mapurojekiti ari nani pane yako blog uye vakapa zvakawanda kuLinux kupfuura iwe, sezvo iwe usina chaunochiva uye zvirinani ndinokutenda nezvako.
Pindura Fernando A.
Vachave nemazana emapurojekiti ari nani kupfuura bhurogu yangu, asi "Yangu blog" haitore mukana weOpenSource kuti ibatsirwe uye inogara ichidzosera "chimwe chinhu" kunharaunda yayo, iyo pakupedzisira, iyo yagara iri chinangwa chedu chikuru.
Ndine urombo kundiisa mukati, asi kana iwe uchifunga kuti Canonical ine mapurojekiti ari nani pane ino blog, nei uripano uye usingashandisi iwo "mapurojekiti"? Ichokwadi chinoratidzika kwandiri kuti chirevo chisina hunhu. Zvakanaka kuti isu tigovane maonero, sekureba sekuremekedza (zvakanaka ... iyo posvo haina kuremekedza zvakanyanya neCanonical / Ubuntu kana vashandisi vayo, asi zvirinani isu tinofanirwa kuratidza muenzaniso).
Handizive kuti ungaenzanisa sei bhurogu ne distro…., Chido chekutamba.
Mm, troll mukuona.
izvo zvese debianita zvinochiva ubuntu elav ... ayo mukurumbira ...! Handizive kana iwe ukaona mamaki emubvunzo, yaisambove chirevo, asi sezvavanotaura, kana ikakuruma iwe kukwenya!
Handina huta .. Vashandisi veUbuntu vanozova nekurwadziwa pavanoona kuti vari pasi pekambani iyo zuva nezuva inoda kufanana neApple neMicrosoft .. Uye kana vazviziva uye voda kutiza, zvino zvichaita iva apo ini, kubva kunaDebian wangu, ini ndichakuona mese muchizvikwenya. Muajajajaa
Chii chaunofanira kuchiva? Zvakanaka, iyo KDE 4.10, semuenzaniso, iyo yawakaedza kuisa pane yako debian kuburikidza neppa. Murevi wenhema anobatwa nekukurumidza kupfuura munhu akaremara.
Ini handina kuisa KDE 4.10 kuburikidza nePPA, zvisinei, sezvandambotaura pamusoro, maPPA chimwe chinhu chinofanira kugodorwa, icho Debian isina nekuti hachidi, asi ini ndinogona kuita ndisina ivo zvakakwana ..
Iwe hauna kuiisa mune imwe ppa, asi usati waita hodgepodge kuiisa, iwe wakaedza
Nzwisisa chimwe chinhu, pakupedzisira iwe uri kutsika-tsika uye ini ndiri kutevera kuyerera, asi hazvina basa, ndinokuudza zvakadaro: maPPA haabvi kuUbuntu, anochengetwa nevashandisi veMunharaunda .. saka .. ini handina dambudziko nazvo .
Isu tinochiva here mamirioni ana Uncle Mark? hehehe, elav kune ubuntu hapana chekugodora, ndinogovana maonero ako
Ini ndinofunga Ubuntu ndiyo yakanakisa sarudzo kune avo vanoda kusiya Windows uye kuenda kuLinux nyika. Asi kana chimwe chiitiko chikawanikwa, hachina kukwezva nekuti kune akawanda ari nani madhiri. Ubuntu ndiwo musuwo wekuti munhu apinde munyika inozotanga kuwanikwa. Izvi zvakaitika kuvanhu vazhinji (kusanganisira ini).
(Ini ndinojekesa kuti ini ndinonyora kubva mukabhuku keMint 13 "Maya", kunyangwe hazvo icho chiratidzo chinowoneka mune chirevo ndiUbuntu. Uye yangu hombe OS iri LMDE, paPC).
"... uye kana zvichiita kuti zvinhu zviwedzere, vagadziri vanotenda zvakafanana, isu takamomoterwa ...". Zvakaoma, Elav, avo vari mumusika iwoyo vanoziva chaizvo kuti Linux inodarikawo kune rimwe divi, kuburikidza nemabhesi akakosha zvakanyanya. Nyaya yacho inoenda kuburikidza nebhizinesi. Kana ivo vakaona kuti Ubuntu iri kuwedzera, ivo vanozoona "gumbo" uye ivo zvirokwazvo vachabatidza, asi kwete nekuti ivo vanotenda kuti Ubuntu ndeye GNU / Linux.
Izvi zvakare zvakajeka kwandiri, asi pano pane yakawanda paranoia. Ivo vanopa Canonical simba rakawanda kwazvo kupfuura zvarinazvo ... zvinoita sekunge kushambadza kwashanda zvakanyanya kune vasiri-Ubuntu vashandisi pane pane "ubuntosos" ivo pachavo.
Zvinotaridza kuti dzimwe nguva vanokanganwa kuti vazhinji vevanhu vanoshandisa komputa havasi programmers uye havafarire mashandiro ehurongwa hwekushanda, vanongoshandisa zvakanakisa zviripo uye zviri nyore kuwana uye kunyangwe Windows isiri iyo inonyanya kuwanikwa, iri inowanikwa zvakanyanya nekuti yakatogadzwa nekumisikidza uye iriwo iyo inozivikanwa nevazhinji, kana iwe ungaisa sisitimu inoshanda iyo hupenyu hwausingazive? Uye ndipo Ubuntu painopa zviyo zvayo zvejecha nekuti, kunyangwe vanhu vazhinji vangazvidemba, Ubuntu ndiyo inonyanya kufambiswa kugoverwa uye vhezheni 13.04 ndeyechokwadi yakagadzikana, zvirinani pakombuta yangu uye ini ndinojekesa kuti ini ndatoedza Debian 7 Kune rimwe divi, ini ndakaverenga zvirevo zvichiti Ubutnu haiteerere munharaunda, uye ndinoshamisika kuti kugoverwa kupi, kwevakakurumbira, kunoita? Pamwe Chakra akaburitsa sarudzo kuti abvunze nharaunda kana yafunga kumira kutsigira 32-bit zvishandiso kana pavakachinja maBundles system yeiyo "yekuwedzera" repository kana kuti pamwe Debian akabvunza nharaunda payakamanikidza Gnome-shell senzvimbo huru ye yaro yazvino vhezheni vhezheni zvisinei nekushoropodzwa kwakawanda. Muchidimbu, hapana bofu rakaipisisa kupfuura iye asingade kuona.
Ini handizive nyika yaunogara, asi sezvo kune kubatana kunopfuura mumwe munhu anga abva windows windows ku ubuntu, akandiudza kuti ndiise distro ne kde ..., kubatana ndiko kutadza kuyedza kutevedzera osx, asi kune shabby uye inorema.
Chakra akamira kushandisa mabundles nekuti munhu wese ainyunyuta nezvawo, mune debian iwe unogona kurodha pasi nezemo nharaunda yaunoda, zvikasadaro ndakanganisa.
Uye ndinofunga iwe unoziva kuti nyika yakakura kwazvo uye kuti chokwadi chekuti shamwari dzako havachiifarire hazvireve kuti vazhinji vacho havaifarire, semuenzaniso, zvakaringana kutaura kuti shamwari dzangu nhatu kune avo Ini ndaisa Kana iwe waifarira ubuntu asi handicho chikonzero ndichiti kubatana ndiyo nharaunda yakanakisa, kana chero chinhu chakadai, ndosaka ndisina kutaura kubatana mune yangu kutaura asi, zvakadaro, kudzikama kweshanduro nyowani kwakanyorwa zvakanaka pa internet. Kana zviri zvaDebian, nharo yako haina basa nekuti dai zvirizvo handinzwisise kuti nei uchigunun'una nezveUbuntu neUbatanidzwa hwayo kana paine Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu, nezvimwe.
imwe, ini ndinogunun'una kuti kubatana ikobvu uye kopi ye osx uye inorema kwazvo (compiz mukati), vaviri hongu unogona kushandisa chero chinhu, chingangove chisipo, kunyangwe hazvo zvakanaka, pamwe kubvira 14.04, unogona chete kushandisa kubatana, zvakapihwa Kuti ivo * vakangwara * vevano tendera vanoenda kubva pagore rekurasikirwa nemari kusvika gore, zvakavawira kuti vashande pane imwe graphic server, kuti pavakaona basa ravakaita nekubatana, makore maviri achazove tsvina.
Asi hei, hapana rimwe bofu rinopfuura iro risingade kuona.
Mhinduro yakanangiswa pandvv92
1.- Pandakataura Debian uye nesarudzo yayo yegnome-ganda senzvimbo huru, kwaive kuratidza kuti chokwadi chekuti mamwe ma distros anoteerera munharaunda yaive nyaya yakachena uye sezviri pachena wapererwa nenharo kuramba izvi .
2.- Kana zviri zveUkubatana iwe zvaunofunga zvakashata uye kopi yeOSX, hapana zvakawanda zvekutaura sezvo chiri chinhu chinozviisa pasi, ini pachangu ndinochida kunyangwe chiine zvinhu zvakawanda zvekugadzirisa.
3.- Nezve graphical server uye nezve kusakwanisa kushandisa imwe desktop desktop muUbuntu Ini ndinonyatso kupokana nazvo, kunyangwe ini ndisiri iye programmer kana chero chinhu chakadai, asi kana munhu aigona kusvika kumwedzi handitendi kuti izvi rakakura kwazvo tekinoroji dambudziko. Pamusoro pezvo, kufungidzira nezve zvingangoitika kana zvingasaitika, pasina kupa nharo dzakasimba, hazvina musoro nekuti, senge iwe, ndinogona kutaura kuti mir ichave yakanakisa graphical server yakambovapo uye kuti KDE iri zvakare ichagadzirisa kukanganisa kwake uye ichatsigira mir, asi iko kungofungidzira kuti hapana chinopa uye zvinopesana, zvinongogadzira makakatanwa munharaunda yeLinux.
Pamwe Debian akabvunza nharaunda paakagadza Gnome-shell senzvimbo huru yeshanduro yayo yazvino yakagadzika kunyangwe paine kushoropodzwa kwakawanda. Muchidimbu, hapana bofu rakaipisisa kupfuura iye asingade kuona.
Ndokumbira undiudzewo kupi kushoropodza kuri? Mune mamwe mazwi, Debian akafunga kushandisa Xfce nekukasira, uye izvo zvakaziviswa kuMunharaunda. Kana pakupedzisira vakasarudza kudzokera kuGNOME (iyo yakagara iri yavo Yekuzvitonga Nharaunda) ivo havana kutengesa chero munhu, uyezve, Debian anoburitsa mamwe maCD CD / maDVD akaita seKDE, XFCE neLXDE.
Saka iwe, anti-ubuntu, kana iwe uchigona kushandisa nharo senge: ubuntu haiteerere kunharaunda yekumisikidza kubatana, ubuntu haiteerere kunharaunda yekugadzira mir, nezvimwe, pasina kuratidza humbowo, asi kana mumwe munhu akarwisa kugovera kwavo. vadikani vachishandisa nharo dzakafanana, saka kana vakachemera mudenga. Kana iwe ukasapa humbowo hwakasimba saka usazvikumbira futi. Pamusoro pezvo, kutaurirana hakuna kufanana nekubvunza, nekuti kana tichienda kune avo, Ubuntu yakashumawo kuti yaizoshandisa kubatana mune ayo emangwana vhezheni.
Saka basa rakamirira rakawandisa, murume akura, nekuti iwe unofanirwa kuenderera uchiratidza munhu wese dzimwe nzira uye kuratidza makambani senge iwo aunodoma kuti kune hupenyu mushure meUbuntu. Nenzira iyo blog iyi inobatsira zvakanyanya mune iyo pfungwa
Ndakawana zvinyorwa nezve zvakanakira wayland pa X.org kuitira kana chero munhu achifarira (vari muChirungu)
1) Une makore mangani?
2) Une hupenyu hwemagariro here?
3) Ndeipi distro yawakatanga nayo?
1) Ndine makore 21 ekuberekwa
2) Ini ndiri wezvematongerwo enyika uye ndine hupenyu hwakawanda hwemagariro, zvirinani munharaunda yangu.
3) Ini ndakatanga ne fedora, ndokuzo linux mint uye pakupedzisira ubuntu
pandev, ndinoda kubvunza kana uine musikana, hehe
xDDD nguva pfupi yadarika ndinongova neshamwari dzehusiku xddd, handisi mumood yemusikana zvingave ahahhaa
Izvi ndizvo zvinhu zvinogumbura vamwe vashandisi veUbuntu.
Chaizvoizvo uye pasina kuzvitaura zvakajeka, Fernando aida kuudza munyori kuti nekuti aive nemafungiro akasiyana, aive mwana, aisaziva zvaaitaura, uye aive asina hupenyu hwemagariro. Zvakare, sezvo aifunga kuti munyori akatanga neUbuntu, iye aida kudzikisira kubva mukushoropodzwa kwechikonzero ichocho.
Hongu, vamwe vashandisi veUbuntu vanofamba-famba. Sezvo ini ndichiziva ivo ndivo vashoma (zvakanyanya kushoma), pane vanoremekedzwa vashandisi veUbuntu. Dambudziko nderekuti izvi zvisingaonekwe zvinoonekwa zvakanyanya.
Uye kuti zvizivikanwe kuti pamusoro apa ndapa zvikonzero zvangu zvekusawirirana nezvakataurwa nemunyori.
Mazhinji emakomenti akaitwa nedumbu.
Ini ndinongonunura zvakataurwa na @Acuadros, @Juancarlos uye @ DevilTroll uye hapana chimwe chinhu.
Ndaneta nekushoropodzwa kweCanonical nevashandisi veLinux vasina kurega izvo zvinofambira mberi.
Ndaneta nekushoropodzwa kweCanonical yekuve kambani yakwanisa kuzviisa kumashure kweWindows neApple neemahara software, chimwe chinhu chisina munhu akambowana.
Unotya, kutya kuti Ubuntu iLinux inoshandiswa zvakanyanya uye unomira kuve vashandisi vakavharwa vevashoma vanoshandisa system.
Linux inokodzera Ubuntu, uye inofanirwa kuti ibudirire, uye chero munhu asingatsigire ari mushure mekubudirira kweLinux hapana chaanoita asi kuuraya akanakisa mashandiro aripo.
Nechikonzero ichocho, mukusavapo kweiyi mhomho yose kumira kuhukura nekuzvipira kutsigira iyo inoshanda system, pane kuivhara zvakanyanya, ndinosiya Linux, ndodzokera kuWindows, uko kunyangwe iine registry yayo, mavhairasi ayo, nezvimwe ... Ndine runyararo rwepfungwa kupfuura neLinux nevashandisi vayo Nyanzvi dzisingade kuti dzibude.
Pindura kune sgaggor
RedHat yanga iri pamusoro peWindows neApple kwenguva yakareba, zvinoitika kuti ivo vakangotarisa pane maseva nyaya, uye nditende, Canonical inzira refu, refu kubva pakusvika RedHat.
Linux inokodzera Ubuntu, uye inokodzera kuti ibudirire
Hakuna baba vanokodzera kuti mwanakomana wavo amurambe, mushure mekugamuchira rudo rwake rwese nechidakadaka kubva paakazvarwa. Huswa hwekupedzisira ndewekuti Ubuntu haitaure nezve Linux Kernel, asi nezve Ubuntu Kernel.
Ndicho chikonzero nei mhomho yese iyi ichimira kuhukura uye ichizvipira kutsigira iyo inoshanda system, pane kuivhara zvakanyanya
Kutsigira Ubuntu? Ubuntu hainditsigire, Ubuntu haina hanya neni kana chero mumwe mushandisi waunoti rabble. Ubuntu inofarira kugadzira mari ... more hapana. Zvirinani ini ndinotsigira Debian, Fedora, openSUSE, ArchLinux, nezvimwe nezvimwewo.
Chinhu chekupedzisira, uye ini ndinokuudza kubva mukuremekedza, kana ukadzokera kuWindows imhaka yekuti iwe unoda. Usashandise vashandisi veLinux sekupembedza, nekuti kunyangwe ndisingakwanise kubvumirana nevazhinji, ndosaka ndiri kuenda kune imwe OS.
Ndakadzokera kuWindows, pakombuta yangu, mushure memakore mashanu kana kupfuura muGnu / Linux nekuti Miguel de Icaza yakaita kuti ndione chokwadi neruzivo rwake. Linux, ndichaishandisa pamaseva kana pazvinenge zvakakodzera. Asi kwete sekutsiva maWindows emamwe maPC.
Pindura kuna Flavio
Zvinoratidzika sezvakanaka kwandiri kubva pakuona kuti ndicho chisarudzo chako uye unofanirwa kuchiremekedza.
Ini zvakare ndinoshandisa Win7, sezvamuchaona, uye zviri nekuda kwezvikonzero zviri pachena izvo tese tatoziva, kuwedzera kune yangu kamera, asi izvo zviri padivi.
Zvisinei, zvinyorwa zvakaita seizvi (@ pandev92, kakati wandei ndinobvumirana nezvakataurwa, asi zvinyorwa zvacho hazvina kunyorwa nedumbu, asi nemusoro, asi zvinangwa zvinogara zvichirasika), uye zvirevo zvavanomutsa ndizvo zvinotungamira kusashandisa kana kusiya Linux.
Kushaikwa kwekubvumirana, pamwe nekugamuchirwa kana kutsigirwa, kunotsausa kwete vashandisi chete asiwo musika (uye ini handisi kutaura nezve kupatsanurwa kunozivikanwa).
Fungidzira chiitiko apo Mir inosvika pakuve iri nani zvakanyanya kupfuura Xorg naWayland.Izvi izvo izvo izvo izvo parizvino zvinonyora zvinyorwa zvakaita seizvi zvichaitei? Chenjerai, vakomana, tarisai iyo enema yekhibhodi inofanirwa kukuvadza.
Ini ndakadzidza nenzira yakaoma kuti pane dzimwe nguva dzaunofanirwa kuziva kuratidza, kucherechedza uye kuva nemoyo murefu. Ini ndanyora akati wandei zvinyorwa paBurjans Blog, pamwe nekumwe kutaura, kwakazonditungamira kumedza mazwi angu kana ndichifananidza mamwe ma distros neFedora uye ndichituka iyo yekupedzisira, uye zvese zvekunyora kubva kune yangu pfupi yekusagadzikana, uyezve pedzisa kudzokera kuheti yebhuruu akarereka musoro.
Iwe unofanirwa kuona nguva yakanaka yekuti Linux ichiri mukushanduka-shanduka, mune ingangoita mamiriro eBeta. Ini ndatozvishingisa kuti kune maviri chete (HONGU, MAVIRI chete) migove inogona kunyatso kudanwa kuti LINUX OPERATING SYSTEM (kwete kupopota) ine mavara ese: RedHat naDebian. Imwe mhosva, imwe haina, kana iwe usiri kuda kubhadhara RedHat kune Centos, izvo zvakafanana chaizvo. Vamwe vese vanosara vachitora kubva kwavari voita kuti vanyori vevashanduri vafare uye vasinganete kuenzanisa Linux neWindows, vasina kuona kuti iyo neimwe haina kana chekuita nazvo, kuti yega yega yakanaka kwazvo nenzira yayo.
Zvakanaka, ndakafamba-famba musango….}
1.- Iwe unotaura kuti Ubuntu inoramba Debian, uye ndinoshamisika kuti Ubuntu inofanirwa kuitei kuti isarambe Debian? nekuti kana iwe usina kucherechedza pawebhu pane ruzivo rwakawanda nezveUbuntu uye kutsamira kwayo padebian http://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/ubuntu-and-debian
Kana chii chimwe chawaitarisira? Zvichida haina kufanana manjaro ine arch, fuduntu (panguva iyoyo) ne fedora, linux mint ne ubuntu, nezvimwe, nezvimwe.
2.- Iwe unoti Ubuntu haichatauri nezve linux kernel asi nezve ubuntu kernel, ERROR, kuratidza rakakura bhatani https://wiki.ubuntu.com/RaringRingtail/ReleaseNotes#Linux_kernel_3.8.8
Kana iwe ukacherekedza inoti ubuntu inoshandisa iyo "ubuntu linux kernel" iyo yakavakirwa pa "linux kernel" mune mamwe mazwi, Ubuntu inoshandura yemahara software, mune ino kernel, uye inoshandura zita asi ichinongedzera kune yekupedzisira, uye ini zvibvunze (zvakare), ichi hachisi chimwe chezvakanakira icho chinofungidzirwa zvakanyanya pasoftware yemahara? asi zvinoita sekunge, sezvazviri nezve ubuntu, saka unofanirwa kutsvaga divi rakamonyoroka rechinhu nemitsara yakaita se "ubuntu inotora mukana wevamwe", "ubuntu inoda kutora mbiri yese", nezvimwe zvinouya kumusoro.
3.- Iwe unoti Ubuntu haukutsigire. Sezvo ini ndichizviona, Ubuntu inoita kuti kugovera kuwanikwe kwauri mahara kurodha pasi, kana chii chimwe chawaitarisira? Chii chinoitwa naDebian, Arch, OpenSuse, Fedora, nezvimwe. Yako, chii chinoita kuti iwe utende kuti vane hanya kupfuura Ubuntu?
4.- Iwe unoti Ubuntu chete hunofunga nezvemari, ndapota, kukura zvishoma kunyanyisa kubvunza here? Kwete zvese zvakasviba uye zvichena, kana vachida mari vanofanirwa kupa sevhisi yakanaka, kana zvisiri, hapana ramangwana, kunze kwekunge vari vehumambo seMicrosoft, kana nhepfenyuro dzenyika yangu (Mexico) asi ngatizvitarisei, zvinowanzoitika kuti kune hupenyu muzuva kuti ubuntu huve monopoly.
Zvakanaka, kutanga ne, gadzira zvinoenderana zvese zvavanoita nekuda kwekuedza kwaDebian. Uye neizvozvo ndinoreva maraibhurari matsva uye kutsamira kunongoshandisa ivo, semuenzaniso Kubatana.
Kana iwe ukacherekedza inoti ubuntu inoshandisa iyo "ubuntu linux kernel" iyo yakavakirwa pa "linux kernel" mune mamwe mazwi, Ubuntu inoshandura yemahara software, mune ino kernel, uye inoshandura zita asi ichinongedzera kune yekupedzisira, uye ini kushamisika (zvakare) ichi hachisi chimwe chezvakanaka izvo zvinofungidzirwa zvakanyanya zvemahara software? asi zvinoita sekunge, sezvo zviri zve ubuntu, saka unofanirwa kutsvaga divi rakamonyoroka rechinhu nemitsara yakaita se "ubuntu inotora mukana wevamwe", "ubuntu inoda kutora mbiri yese", nezvimwe zvinouya kumusoro.
Ndine chokwadi chekuti Ubuntu haichinje kernel zvachose, kana zvishoma zvishoma. Debian inoshandura zvimwe zvinhu zvakawanda uye haina kudaidza iyo kernel "debian linux kernel".
Tarisa uone zviitiko zvechangobva kuitika izvo zvave kuitika .. Ndeapi mitezo yeMunharaunda iyo Ubuntu yakafunga nezvekuzviita? Vakakubvunza neimwe nzira, foramu, email, kana zvimwe zvakafanana?
Ini handisi kuzoenda mukukura nyaya, asi, ndinofunga mune tarisiro yekuti Canonical haizove imwe mhando yeMonopoly mukati meGNU / Linux nyika. Nguva ichatitaurira isu izwi rekupedzisira.
Pane zvinhu zvishoma zvinonhuwirira zvakaipa, Unity Inotevera inoti zvichaitwa muQML uye kuti kusungwa kweQt yeMir QMir kuri kusimukira asi ini ndinoona pane launchpad kuti chirongwa ichi hachina kuchinjwa kubva munaKurume mmm ... ichave yatopedzwa here?
Wow, uyo akabatanidzwa nemurazvo post xD, ndinofunga uyu musoro une muswe, asi iwe unofanirwa kuona ese akasiyana mapoinzi ekuona kweizvi:
Kubvisa Mir iripo Wayland kupusa here?. Chaizvoizvo hongu, nekuti inovhara Ubuntu zvakanyanya, uye Kubatana. Kunze kweyekuti Mir inoratidzira pseudo-server, iri panzvimbo yemaitiro, asingagone kushanda (panguva ino) isina X.org kana Wayland.
Kana ini handifunge kuti zvakafanira kubvisa kubva kuUbuntu, yakwanisa kuita Linux inozivikanwa, asi izvo zvinogona kuitwa, asi ini handigovane, ndeyokuzviita mukurumbira uye wobva wavhara zvishoma nezvishoma woenderera kubva kune avo vane yakakuita mukurumbira, siya hunhu hweLinux neGNU uye utore mukana webasa revamwe usingapi chinhu kudzosera. NDIYO ZVINODZIDZISWA. Nekuti yekupedzisira ndizvo zvakaitwa neCanonical, yakatora mukana weGnome, zvishandiso zvayo, Debian, mapakeji ayo uye ayo ekuchengetera, GNU neLinux, uye wozoiviga mukati meUbuntu, uye uchifungira kuti aya mapurojekiti ibasa rake, sekutumidza zita. iyo kernel sekunge yaive yekugadzira kwake, isingatumidze zita reDebian chero kupi, ndoda Gnome (iyo kana zvisiri nekuda kwezvimwe zvirongwa zvinoisa mu »About» uye haibve). ZVINONYANGA.
Nekuti iwe unobvumirana zvakanyanya kana zvishoma nefilosofi yeprojekiti, asi zvishoma nerezinesi kutaura kuti ndiani munyori wazvo, uye icho chinhu chisingaitwe neCanonical.
Uye kana izvo zvisina kuremekedzwa, ngavatore ivo Debian uye vhara Canonical kubva kushandisa zvinyorwa zvavo, kana kuti ivo vatore Gnome uye vadzivise kushandisa desktop yavo ... vamwe vachandiudza izvozvi, asi izvo zvinopesana nehungwaru kana zvinangwa yeaya mapurojekiti, yaaa, sekungorega kutaura kuti ndiani munyori wesoftware, saka kana vakapfuura nehupenyu vachipfuura kuburikidza nekutsigirwa nezvakakodzera uye nemunyori wemapurojekiti evamwe, ekupedzisira anogona zvakare kupfuura kuburikidza nekutsigira izvi.
Ini ndichataurawo chimwe chinhu, zvisati zvaitika mukati meLinux zvisati zvanyatso kuoneka, imwe yaibva kune imwe distro kana imwe, kubva kune imwe desktop kana imwe, asi ruremekedzo rwaiwirirana. Iye zvino chero munhu anoisa Linux paPC yavo uye anofunga kuti ndivo mambo wemambo, uye vanouya kuzotamba nekupa zvidzidzo kune vamwe. Kwandiri, vashandisi ava ndivo vanokuvadza Linux, uye zvinosuwisa, vazhinji vacho vagadziri veCanonical, kana yemamwe mapurojekiti, uye kushivirira kwavo kwakaderera kune vamwe ndiko kunokonzera matambudziko.
Kana iwe uchida kuvharwa-pfungwa, uye usingatende vamwe nekushandisa software yako, zviri nyore, enda kuMac OS kana Windows. Asi muLinux, kana iwe uchizotora mukana wevamwe vanhu basa, chidiki ndechekuvatenda nekupa, izvo muCanonical ivo vasingaite. Uye kana vachida kugadzira yavo yakavharwa uye isingawirirane OS, ngavazvigadzirire ivo vega, neiyo musimboti, Kubatana kwayo shit ** uye maturusi ayo (ayo mumaonero angu ega akagadzirwa zvisina kusimba) izvo zvatove zvakanaka kutora basa revamwe.
Uye yazvino vhezheni yeUbuntu yakagadzikana, uye Kubatana kwakavandudza mashandiro ayo, asi ichiri inononoka uye inorema, zvisinei kuti inorema ani.
Ndiri kuverenga zvirevo, uye iwe unotaura nezve Gnu-Linux sekunge ese ma distros anosangana nenzira dzinodiwa kuti dzionekwe semahara-software. Kana iwe ukateerera Stallman, hapana yeayo iwe aunodoma anogona kutariswa nenzira iyoyo, kana Debian iyo inosanganisira yepamutemo software.
Kubatana chirongwa icho chakanangana nekushandisa imwechete interface, (ine diki shanduko) yezvose zvishandiso, mapiritsi, mobiles, pc, tv ... Uye chengetedza kupinda kune ako ese mafaera zvisinei nechero mudziyo wauri kushandisa. Izvi hazvisi izvo izvo mamwe ma distros arikutsvaga, vasingade kubuda padesktop pc yehupenyu hwese. Ini ndinonzwisisa zvine musoro kuti Canonical inofanirwa kuwana yayo imwe sarudzo, nekuti zviri pachena kuti Wayland haitsvage izvo zviri kutsvakwa nekambani yeSouth Africa.
Chimwe chinhu ndechekuti, mukuti ini ndinobvumirana nezvakawanda zvemashoko, nzira yekuzviita yanga iri inokatyamadza uye ini ndaisada kushoropodza kwavo, zvinoita senge kusazvidza kukuru.
Isu tese tinoziva kuti munyika yepachena uye semi-yemahara software, hapana nzira yekubvumirana pane chero chinhu zvachose. Distro yega yega ine yayo nzira yekupakira, uye isu vedu vanokuvadzwa neakasiyana aya asinganzwisiswe ndivo vashandisi,
Saka isu tinoenderera mberi, mushure memakore akawanda kudaro, kuti hongu .deb hongu rpm .., uye chokwadi ndechekuti, handifunge kuti zvinonetsa kubvumirana pane zvishoma, chinoshayikwa ndiko kuda, ndizvo zvandaida chaizvo ita iyo yemahara uye semi-yemahara software yaive yakafanana, zvirinani mune zvakakosha.
Asi taona zvatakaona, iroto risingabviri, risingabviri seWindows inoita kodhi ye "nomwe" kuruzhinji. Vanokundikana chaivo isu, vashandisi.
merlin the debianite akadaro
Nei uchinetsekana nezvinoita ubuntu sekunge kufambira mberi kwayo "kukuru" kwakabata Debian.
Linux Mint inogara iri nani pane Ubuntu, asi debian uye arch zvichagara zviri nani.
Pindura merlin the debianite
Tremendous murazvo uya uyo wanga wakapakata zvombo apa.
Chokwadi ndechekuti mamiriro eCanonical-Ubuntu nemapurojekiti ayo haana basa kwandiri, chero bedzi asingakanganise vamwe. Uye kuuya kune izvi, Mir yaizokanganisa sei mapurojekiti ekurasa-semuenzaniso, semuenzaniso, Xubuntu?
Zvakanaka, zvinokanganisa kuti avo ve xcfe vafunge kuiisa kumir, pus ichafanirwa kushandiswa newayland kana kuenderera ne x, mune yekutanga kesi inogona kunge iri nyaya yekuti hauna rutsigiro kubva kuna nvidia kana amd, zviri pamutemo , asi zvakadaro isu tichafanirwa kumirira, mugore tichazoziva.
Zvakanaka, saka ngatione zvinoitika.
Vakakubvunza nezve Xubuntu, kwete xfce. Uri kupindura sekunge zvaunoita muUbuntu neUbatana zviri kukanganisa zvaunoita muXubuntu, uye zvakatonyanya, sekunge izvo zvinoitwa mu xubuntu zvichakunda mu xfce.
Izvo Canonical iri kuita naMir uye Qt / QML ndeye chete kune iyo Unity graphical bhizinesi zvese paPC nemidziyo nhare, asi hwaro system (iyo inodhonzwa kubva kuDebian) icharamba yakafanana, uye nharaunda inotarisira Xubuntu, kune izvo zvinoenderana nedhesiki rembeva, iwe uchafanirwa kutevedzera izvo Xfce inosarudza uye kwete Canonical. Sezvo pandev yatotaurwa nezvako kwauri, muXFCE havasati vataura chinhu parizvino (ivo havana "kutora mativi" muhondo iyi, ipapo), uye ivo vanofanirwa kusarudza kuti voenda naWayland kana Mir, kana kunyatsoramba vari "vasina kwavakarerekera" uye gara muX.
asi izvo zvingadai zvave kubvunza asiri-ubuntu mushandisi kusarerekera uye kurongeka
Kwete zvachose, zvandaitaura ndezvekuti kana xcfe ikasatora divi, xubuntu haigone kuita chero chinhu kugadzirisa chero chinhu.
PAKUPEDZISIRA IYI NDIPO DAMBUDZIKO RIKURU RINOTSIMBISWA NEMAFUMO "LINUX FRAGMENTATION."
MIGUEL DE ICAZA (GNOME ANOGADZIRA) AKANGA AKARURAMA, KUTI AKAPUNA IYI DAMBUDZIKO RIKURU AKASARUDZA KUTI ACHINZE KUNA MAC, KWAAVE NECHOKWADI KUTI ZVESE ZVICHAMUSHANDIRA ZVAKANAKA WAKAITA KUTI HUPENYU HUPENYU HUNYANYA.
ZVAKANAKA, NDIKO CHINONYANYA KUSANGANISA KWENYIKA YEMAZUVA, ZVINOKUVADZA VANHU VANOGONESA, ASI IZVI ZVIRI KUGUMA
Kana iwe uri kutaura nezve rusununguko munyika ye linux, saka nderipi dambudziko? Canonical ane kodzero yekuita chero chaanoda ne distro yake, kana iwe usingaifarire, nekuti pane zvakawanda zvekusarudza kubva, iwe unotambisa nguva yakawanda uchinyora iyi mhando yepositi kana iwe uchifanira kushambadzira chimwe chinhu chinokwezva vamwe vashandisi ku Linux ini ndinofunga haina kana kusvika 4% pasirese, nei? Kune yerudzi urwu rwekuburitsa, vashandisi vatsva vari kutsvaga dzimwe nzira kunze kwemahwindo uye ndedzipi pfungwa dzavanotora nedare remusika iri? pakupedzisira vanozopedzisira vodzoka vasina kukwanisa kujekesa kusahadzika kwavo. Ini ndinoona yakawanda yekunyanyisa kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe uye izvi hazvipe mukana pakupararira kwemahara software nesimba rakakura. Uku kushambadzira zvisina kunanga kuUbuntu kunyangwe tichizvida kana kuti kwete nekuti vanogara vachigadzira nhau dzezvakanaka kana zvakaipa, uye kunyangwe zvichirwadza kana uchitaura nezveLinux, chinhu chekutanga vanhu mumugwagwa vanokuudza ndeche UBUNTU, kana fedora kana debian kana ndoda arch semuenzaniso inozivikanwa., uye pano hausi mubvunzo wekutaura kuti ndiani ari nani, kana tikasatsvaga maitiro ekuwedzera zvinyorwa zvakakosha kuverenga, regai VaShuttleworth vaite naUbuntu izvo zvavanofunga zvakanyanya.
kuti uite zvaunoda ne distro yako, kana usingaifarire, nekuti pane zvakawanda zve distro zvokusarudza kubva, iwe unotambisa nguva yakawanda uchinyora iyi mhando yepositi paunofanira kushambadzira chimwe chinhu chinokwezva vamwe vashandisi kuLinux pane zvandiri kufunga kuti haina kana kusvika 4% pasirese nei? Kune yerudzi urwu rwekuburitsa, vashandisi vatsva vari kutsvaga dzimwe nzira kunze kwemahwindo uye ndedzipi pfungwa dzavanotora nedare remusika iri? pakupedzisira vanozopedzisira vodzoka vasina kukwanisa kujekesa kusahadzika kwavo. Ndinoona yakawanda yekushingairira kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe uye izvi hazvipe mukana pakupararira kwemahara software nesimba rakakura. Uku kushambadzira zvisina kunanga kuUbuntu kunyangwe tichizvida kana kuti kwete nekuti vanogara vachigadzira nhau dzezvakanaka kana zvakaipa, uye kunyangwe zvichirwadza kana uchitaura nezveLinux, chinhu chekutanga vanhu mumugwagwa vanokuudza ndeche UBUNTU, kana fedora kana debian kana ndoda arch semuenzaniso inozivikanwa., uye pano hausi mubvunzo wekutaura kuti ndiani ari nani, kana tikasatsvaga maitiro ekuwedzera zvinyorwa zvakakosha kuverenga, regai VaShuttleworth vaite naUbuntu izvo zvavanofunga zvakanyanya.
Mukuti mhando iyi yekukurukurirana inoparadzanisa kana kutyisidzira zvishoma avo vanofunga zvekuyedza Linux, uri chokwadi, zvirinani kwandiri ini ndakaronga kutanga neUbuntu asi ndichiona kuti vakanda shit yakawanda pairi ndakafunga paMint (Kunyangwe icho chaisave chakaipa sarudzo, Mint inoshanda mushandisi-chero zvazvingava).
Saka iwe unoedza zvinoenderana nekuti ine mvumo here kana kuti kwete yeguta?
Iwe ungarasikirwa nekuyedza zvinhu zvakawanda ipapo, nekuti vanhu vanogunun'unawo nezve kuoma kwekuisa Arch kana Gentoo; vanhu vanoti KDE ndiyo yakanakisa desktop; uye zvakare vanhu vanoti iyo yakanakisa bhurawuza ndeye Chrome ... uye ini ndinogona kuenderera nemimwe mienzaniso yezvinhu zvinotaurwa nevazhinji uye izvo, kunyangwe ini ndisingagone kuti zvinopesana, kana ndichigona kuvimbisa kuti chimwe chinhu chakakurumbira hachiwanzo chii chakanakira kugara munhu wese, kusanganisira iwe.
Iwe unoda kuraira here? Bvunza uye teerera, asi usaverenge mafungire pazvinhu zvezvavanoda uye wozvitora sekunge chiri chokwadi.
Uye iwe unofanirwa kuwedzera: Bvunzo, bvunzo uye bvunzo uye ita yako yekuzviongorora, uchitevera rimwe zano.
Ndipo pandakanga ndichangotanga muLinux, pandakabata tambo ndakaedza akawanda madistros uye kubva ipapo zvandaida zvakatanga kubuda ... zvandinoreva ndezvekuti hazvinakidze kusvika uine fariro mune imwe nyaya uye chinhu chekutanga chaunoona hurukuro dzese kwese. Kwaziso.
Anodiwa mudhara, dambudziko harisi hurukuro chero bedzi dzichizotungamira kune chinobatsira, dambudziko ndere "dhongi" nhaurirano (ndine hurombo) dzisingatungamire chero kupi, uye izvo zvibereko zvekushayikwa kwekutarisira, sezvazviri inowanzoonekwa munguva pfupi yapfuura mune akasiyana blog's.
Maonero akapusa uye akareruka andaona, nei Linux isingapfuure 2% pamakomputa edesktop epamba ... pffff
Ehezve, kune zvinhu zvakaita seizvi ..., saka hazvizove nekuda kwekushomeka kwekushambadzira, nekuda kwekushaikwa kwerutsigiro kubva kumakambani ehurdware, nekuda kwekushayikwa kwemitambo (zvishoma nezvishoma ichagadziriswa zvishoma senge muna osx), nekuda kwekushomeka kwevatyairi vakanaka kutamba naamd uye intel, nekuda kwekushayikwa kwemutyairi akanaka uye wepasirese odhiyo, izvo zvisingakonzere matambudziko senge pulseaudio yandipa zvichienderana nekombuta, nezvimwewo. .
Kwete, ndezvekutaura chokwadi pamablog, KUNONYA mazai ako.
Ndiri kuona kuti vakadzima imwe yemashoko angu, kunyangwe yanga isina chero rudzi rwekutuka. Handina kufunga kuti vanganyure zvakadaro.
Ini handina simba rekudzima chero makomendi, uye ini handione chero dzadzimwa komendi kubva kwauri, saka handinzwisise kuti izvi ndezvei.
Ubuntu (ndiko kuti, Canonical) akafanana newaunoshanda pamweya uyo rimwe zuva anokupa tsvimbo yezvaanofarira, uye unoona kuti anga asiri ane hushamwari sezvaaitaridzika.
Iwe wakadzidza zvinhu neshamwari yako uye wakave nenguva yakanaka, iwe uchagara uchimutenda, asi iwe wakaziva kuti pakupedzisira yaive shit uye yakanga isina kukosha.
Izvo Ubuntu zvainoda kuita kushandisa yayo chinzvimbo chesimba (kuve yakanyanya kushandiswa Linux distro pakombuta) uye kumisikidza ayo maitiro uye mhinduro, izvo zvichatarisirwawo navo, sezvo ivo vanogadzira yavo distro, pasina kugovera kumusoro.
Uye chandino fungidzira ndechekuti kune vanhu vanoti vanoda software yemahara inovatsigira uye inovadzivirira, kuti kana rusununguko, kuti kana vakaita zvakanaka zvakawanda ... rimwe zuva ndakaverenga chirevo kubva kune mumwe munhu akaedza kombiyuta yaDell ine pre-yakaiswa Ubuntu isa imwe distro, uye yaive nematambudziko akawanda, nekuti sezviri pachena Dell anga agadzira zvigamba kana madhiraivho chaiwo ehunhu chete ... OLÉ!
Kugadzirisa bug # 1 uye kurwisa Microsoft, ivo vari kuve Microsoft munzira. Varegei vaite zvavanoda, asi musavimba neni.
chaiko, uye ini handioni chikonzero chacho nemoyo wese, kamwechete kanonyorwa paakati chiratidzo chavaida kutevera chaive icho che osx uye kwete chemahwindo ..., saka vanokanganisa ipapo, nekuti ini handione kubatana kwazvinogona kukunda osx, kunze kwekuremerwa ahaahahahha.
Vakomana, vakomana, munongotambisa nguva muhurukuro dzisina musoro, ndinojekesa: Handisi kuti nyaya yacho haina kukosha…. (Uye hurukuro yakapusa inoenda, nekuti hapana anozochinja pfungwa) muhurukuro ine hungwaru mapato ese anosvika mukubvumirana, umo vaviri vanofanirwa kutaurirana kuti vasvike pachibvumirano chinobatsira vese. Asi izvi kubva pakuona kwaunozvitarisa, hazvisi kuzounza chero chinhu chakanaka, vanongotukwa, vane nguva yakaipa, vanotsamwa ...
Pindura kuna Flareon
hero yuy akadaro
Ndinoda kutora mukana wekubvunza manejimendi kuti iwedzere kuremekedza vashandisi ve ubuntu vanoshanyira blog Kushanyira iyo blog uye nekuona mashandisiro anoita vamwe maneja manotsi akadai, kana kuita zvisirizvo zvirevo kune ubunto chiitiko chisingafadzi, Elav uri munhu akangwara kwazvo, une ruzivo rwakawanda nezveLinux (uye zvirokwazvo mune dzimwe nzvimbo dzakawanda) munhu uyo kunyange ini ndisingazive kuyemura. Icho chiri nyore chokwadi chekuva wenyika huru ine mbiri seCuba, inokuita iwe unokosha kwandiri. Ndokumbirawo usadonhedze kudenha zvisina musoro. Kwaziso nerudo rukuru kubva kuEl Salvador.
Pindura kuna heero yuy
Heero yuy akadaro
Hei kushata kwainge kwaita, kana vakadzima imwe yemashoko angu ... chinhu chinonakidza ndechekuti haina kugumbura chero munhu, yakangoedza kuratidza kuti hazvina basa kupokana nenzira iyi.
Zvino kana zvataurwa zvangu zvikaonekwa, Maita basa
Zvakaitika kuti ivo havana kubvumidzwa, asi hazviwanzo kuti muDLinux tinodzima komendi ... zvisingawanzo.
Linux inofanira kuuya pamwe chete uye isingatsamwisane, uye ndinoziva nei; shanje.
Ndinovimba kuti nerimwe zuva hondo iyi yekutukana nekufungirana ichapera.
Ndakaona zvakawanda zvisina musoro kutaura pano, ndiregerereiwo vamwe asi ndozvazviri.
Izvo zvese inyaya yekuravira uye zvido, nditarise ini ndinoda linux, pakombuta iyi iri yemukadzi wangu ndine canaima uye ndinokunda vista, nekuti yakauya nenzira iyoyo kubva kufekitori uye haadi linux nekuti haana kutsungirira kutora iyo nzira seni.
mudonzvo rangu ndine kubuntu kwandakavandudza nezuro uye ndinoifarira, uye ivo vanoziva kuti yakanga yakanganikwa nekanonica uye kunyangwe zvakadaro havandione ndichinyora zvisina maturo kana hupenzi, saka ndinokumbira munhu wese kutsungirira.
Iye zvino ini ndinochengetedza chirevo changu chekambani Kambani YEMAHARA, uye Ubuntu chigadzirwa, nekudaro vane kodzero yekuita zvavanoda nekuti chakakosha ipundutso, kwete nharaunda. Kupera kwenyaya, chii chisingaongi? Uye chii chavaikarira? chinokosheswa ndizvo zvinangwa zvavo, saka ngativafuratidzei uye varege vapfuurire nerwendo.
Kuti izvo zvigadzirwa ndezvekuti ndizvo izvo zvinounza mazhinji kune nyika yelinux, zvakanaka mumaonero angu kana vazhinji vedu vakaona tetra, handifunge kuti vatsva vanozvizivawo.
Mhinduro yangu ingave yekudzikisira iyo ubuntu nhau uye kwete kuitora mune zvakawanda sezvinobvira, pamwe nekuwedzera ruzivo uye kushambadzira kwemamwe ese ma distros. uye chero munhu anoda kushandisa ubuntu, saka kana vachida.
Kutanga iwe unobvuma kuti izvi ndezve zvekuravira uye zvinodiwa maererano neizvo munhu wese anoda kupa sechigadzirwa che linux uye chero munhu anoda kuchidya, uye pakupedzisira unobuda nenyaya yekuti iwe unofanirwa kumisikidza nhau dzechigadzirwa chiri iyo huru linux nyika. Sezvo isingatarise zvaunotaura kuremekedza nemhinduro yaunofunga.
Mune mamwe mazwi, kusiyanisa kwekufunga kunoremekedzwa, asi avo vanofunga mune dzimwe nzira vanofanirwa kusendekwa parutivi.
mwanakomana, hazvisi zvekuti ini ndoda kupindira mukusiyana kwekufunga, zvinopesana nekambani inoshandisa uye inozvidza pamadiro. Kana kuti ndezvekuti zviitiko zvese izvi hazvina kutanga nemaoko avo here? Ini handireve kutonga munhu wese anoda kushandisa Ubuntu - kwete, nekuti munhu wese akasununguka kuzviita, kana zvisiri izvo kuti hatichateedzere propaganda yeCanonical nezviito zvayo, nekuti zvinhu zviviri zvakadaro zvinogona kuitika, kana ivo vanopa nhoroondo kuti iyo hazvina kunaka kuramba mavambo sezvaari kuita, kana kamwechete uye zvachose vanoparadzanisa zvachose nenyika iri gnu / linux. (izvo zvandinofunga pakupedzisira ndizvo zvavachaitira kufamba kwavo kuri pachena).
Kwazisai Daniel, mangwanani akanaka
Eya, iyo "propaganda" inogadzirwa nemapato maviri chete: Canonical in favor (neyavo omgubuntu blog, semuenzaniso), uye antiubuntu inopesana (nezvinyorwa zvakaita seizvi). Kunze kweizvi zviviri, hazviwanzoitika kune vashandisi veUbuntu kuti vaite basa rekushambadzira, ivo vanongoita zvinyorwa zvehurongwa pamwe nechero mushandisi weimwe distro.
Rusununguko rwekufunga rwaive fananidzo kune izvo iwe zvawakaisa mune yako posvo, nekuti, ndinodzokorora, kune rumwe rutivi iwe uri kubvuma kuti iyi inyaya yekuravira uye iwe unopa muenzaniso wezvinoitika newe nemumwe wako, asi pa imwe iwe yaunofunga kuti Mhinduro ndeyekudzora sei nhau iyo kugovera kune, nekuda kwekuti kune vateveri vanoirwisa uye vashandisi vayo kune zvisarudzo zvinoitwa nekambani inopihwa simba rakakwirira kupfuura zvarinazvo.
r3irm3 m4s akadaro
Usakanganwa kuti uyo akanyora chinyorwa ndiUruguayan; ndiko kuti, hunyanzvi hwenyika inogara muArgentina neBrazil uye unochema panotorwa bhodhoro.
Pindura kuna r3irm3 m4s
Wakatadza. Iye akanyora izvi chiItaly uye anogara kuSpain.
Pindura kuna diazepan
wtf lol? xD Ini handisi Uruguayan ahahhahh
Ndinokumbira ruregerero. Kusuruvara kutaura kwangu. Kwete nekuti ini handifunge nezvazvo, asi haisi nzvimbo chaiyo yekuzviita. Nenzvimbo ini handireve iyo blog asi iyo posvo pachayo.
Ubuntu is a hybrid distro (nharaunda + yemubatanidzwa) uye zvakajairika kuona urwu rudzi rwekupesana. Kana dambudziko riri MIR, ipapo enda paLaunchpad, tora iyo sosi kodhi uye uvandudze kuenderana ne KDE nedzimwe nzvimbo dzedesktop (kana ukashinga kugadzirisa kodhi yekodhi uye kuiyedza nguva dzose, hongu). Izvi ndizvo zvakaitwa nevanhu veMint pavakaona kuti iyo Ubuntu package manejimendi system yanga ichibva kuGuatemala ichienda kuGuatemala.
Debian akawedzera iyo GDebi uye software-nzvimbo (zvese, nerubatsiro rweCannonical) uye kana munguva pfupi iri kutevera MIR inokwanisa kuve munzvimbo yekuyedza / isina kugadzikana, ipapo kutsamwa kweva fanboys / vanovenga vari mune ino distro vanozovhara uye Ivo vachatenderana neCannonical sekunge pasina chakaitika (kune vanhu vanofarira Kubatana GUI uye ini handinyunyute, nekuti zvakangofanana neziso-zvihwitsi seAca muOS X uye Aero muWindows Vista / 7, asi zvakadaro ndinovaremekedza uye handiedze kuita senge ndaive muevhangeri con murume sezvainoitirwa mumurazvo uyu).
Zvino, iyo joke ndeiyi: Ko kana MIR yaive yechokwadi grafiti server? Iko kutsamwa kwaizoita zvine musoro here?
Wese munhu anonyunyuta nezveUbuntu nezve izvi zvisina maturo zvekuti nenzira iyo yainobata nayo mapakeji uye hutongi hwevashandisi nekutenda nekushungurudzwa kwe "sudo" kuraira (izvo zvandisingabvumirane nazvo, nekuti hazviite kuti mushandisi anouya Windows azive kuti yako system inogona kunge isina kudzivirirwa).
Zvakare, iyo Launchpad inogara ichishanda kana Debian Stable isingaise iyo yakagadziridzwa Chromium mumashure ayo kana iri mune yekuvandudza 4 yebazi rayo Rakasimba uye chero chinhu chipi zvacho chinotipa usimbe kana isu tinoda kuumba yedu Debian kune stratospheric nhanho.
Nevashandisi ava, chero munhu achazoshandisa Crunchbang, CentOS uye / kana slackware.
Zvakanaka hapana akadaro
Basa rekugadzira nharaunda dzese dzinoenderana nechizvarwa chitsva chemaseva emifananidzo rakatoitwa, pakave nekutaura kwenguva refu uye kwave nemakore akati wandei kusvika Wayland yapera.Sei vhiri raizofanira kudzoreredzwa kaviri pane chavanoda cheCanonical ndiani akagadza asingaverenge munhu?
Pane musiyano mukuru mukuwedzera / kugadzirisa chimwe chinhu mune imwe software kuti chive chakazara kana kugadzirisa chero dambudziko raungave uine uye uine zvishoma zvishoma kuti uite zvese zvakare kune chimwe chinhu chinoitwa mukutenda kwakashata uye nechinangwa chekusarudzika uye kuzvidzora.
Nzira chete yatinozoona Mir mune distro saDebian ndeyekuti, zvinosuwisa kune vese, inoiswa uye hapana sarudzo kunze kwekubata nayo uye kunyangwe zvakadaro, zvingangodaro zvisingaite uye kunyangwe mune yekufungidzira nyaya yekuti chimwe chinhu chakadai kana zvikaitika, zvakataurwa pamusoro paMir hazviitwe nezvikonzero zvese zviri munyika, chero kugoverwa kunoitisa, hazvisi zvekushingairira kana kukuvadzwa egos, asi nezve kuva nezvigunwe zviviri kumberi uye kuona zvinhu zvine maonero.
Kana icho chinyorwa chakataura nezve nzira mapakeji uye hutongi hunogadziriswa
yevashandisi, iwe ungadai wakaverenga zvirevo nezvazvo, asi sezvo zvisiri izvo asi nezve graphical server, kutaura nezve mamwe maOS kana zvimwe zvisina hukama misoro haina basa uye kungave kuri kutsausa kutarisisa kubva pakati wepakati wechinyorwa.
Launchpad (ndinofungidzira kuti maPPA) haana kuchengetedzwa neCanonical, asi nevanhu vanobva munharaunda, pane Canonical iyo chete kukosha kwayo ndeyekupa imba yekuchengetera, hapana chimwezve, iro rese basa ndere munharaunda chete.
Zvine musoro here kurega nekuti vamwe havafunge kana kuona zvinhu zvakafanana? Kana zvinoitika kuti kuve neyako maitiro pane kungotevedzera kurongedza pasina mubvunzo chichava chinhu chakakodzera kuita?
Sezvavanotaura padhuze nepano, kana iwe ukadyara mhepo, zvaunokohwa imadutu. Izvo hazvisi nekuda kwekuva ivo, kana nekuda kwegodo, kana nekuda kwechero yeavo vanotambudza zvikonzero zvakatumidzwa zita, zvinongova izvo kuti Canonical iri kunhonga nguruve.
Mubvunzo Nei vhiri richifanirwa kudzokororwa kaviri nekuda kweCanonical whim iyo yakamisikidza isina kuverenga kune chero munhu?
Mhinduro: nekuti ikambani yakazvimiririra ine zvido zvayo uye zvinangwa zvakasimbiswa zvinopesana nezvido nezvinangwa zvemunharaunda)
Izvozvowo zvinogona kutaurwa nezveRed Hat neNovell, makambani ayo muzviitiko zvakawanda anotarisa pane bhizinesi chikamu uye vanopa hushamwari hwakanyanya kunyaradza kupfuura Ubuntu.
Zvisinei, pane zvinopfuura mazana matatu GNU / Linux distros uye kushoropodza imwe distro haisiyo mhinduro. Kana ndichida premium service, ipapo ndinonyorera kuRed Hat Network, ndinobhadhara kunyorera kwangu kwakachipa kupfuura rezinesi reWindows Server 300 uye ndinokwanisa kuwana repo repamutemo, ndichiziva kuti ndinogona kufunga nezve kambani iri chaizvo tarisa vashandisi vako uye mupiro wavo (Kana iwe uri anti-yemubatanidzwa, saka unoshandisa Debian, Slackware, CentOS uye mamwe ma distros).
Chinhu chimwe chinofanira kucherechedzwa uye ndiko kuti, kunze kwezviitiko zvishoma, ini ndaizoisa ruoko rwangu pamoto nekuti Ubuntu (kugovera) haisi kushoropodzwa, asi asi iyo kambani iri kumashure kwayo nemitemo yayo.
Iyo "Linux Yevanhu Vemunhu", kuswedera padyo nevashandisi, kugadzira yakakurumbira distro, kusvika pakuziva nekuparadzira GNU / Linux…. uye pakupedzisira pfungwa yakajairwa kwakatangira Ubuntu HAIYO dambudziko. Dambudziko nderekuti kambani irishure kwayo "inotengesa" izvo asi izvo zvayainopa zvinopesana.
Chaizvoizvo ivo vari kukanganisa chirongwa neakawanda mukana, senge Ubuntu iri (kana yaive) kunze kwekuda kwake uye kufarira bhizinesi. Zvakajairika kuti hasha dzisimbe pavanenge vachiedza "kuparadza" chimwe chinhu chakanaka.
Zvakanaka, ini ndinofunga iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune zvinyorwa mumablog akasiyana, nekuti pese panotaurwa Ubuntu nezvazvo (nekuti vhezheni nyowani inobuda, nekuti vanozivisa imwe shanduko, nezvimwewo) iyo inomiririra antiubuntu (kwete anti-canonical) vanhu buda kuzopopota nezvose zvinopesana neUbuntu, Kubatana uye vashandisi veiyi distro.
DanielC, ini ndinofunga vari kubhadhara zvakanyanya uye vachipa kukosha kwakanyanya kune mafeni uye troll, iwe unofanirwa kutarisisa kuboka rese uye vanhu vane zvigunwe zviviri zvehuma, kwete chete vaviri mapenzi, avo zvinosuwisa, kune kwese kwese .
Kana zvakare kuti kubatwa kwakanyanya kunouya mupfungwa.
Zvakanaka, saka regai ivo vagadzire software inosangana nezvavanoda uye zvinangwa zvavo kunze kwenharaunda pane kuvakanganisa uye kuvada kuti vatambe kumwanakomana wavo chero nguva pavanonzwa nezvazvo.
Zvino, chero bedzi iwe uchitora mukana uzere webasa revamwe, zvishoma zvaungaite kuve nemodicum yekufunga uye usayedze kudzora nekumanikidza kuda kwako nenzira yauri kuzviita nayo.
Ndiri kutya kuti kupa KDE rutsigiro rweMir hachisi chinhu chiri mumaoko evashoma veLinuxeros, pane zvinhu zvakawanda zvinodzivirira rutsigiro urwu, ndinokukurudzira kana usati waverenga zvinyorwa izvi naMartin Gräßlin, iyo huru KDE mugadziri:
Blablablablabla ... semunhu anoshandisa ndiri kurwara nekuverenga tantrum dzevamwe vashandisi ve distros vachinyunyuta nezve ubuntu. Kana mamwe mazuva vatyairi vakashaikwa, zvinodaro nekuti nharaunda yako yakanaka haishande kana kuzviita nenzira isiri iyo ... ndinoti nharaunda yako nekuti ini handisi wangu, ndinopfuura kubva kwauri pamwe necanonon, ndinowana zvese ruzha rwaunoita nekuti canonical kwete zvinoita basa rako… .iyi mahara software… kwete izvo zvaunoti ndizvo.
Asi ndeipi bulshit yauri kutaura? Kana isingasviki gumi muzana yeUbuntu inogadzirwa neCanonical, mamwe ese software inotorwa yakananga kubva munharaunda, vatyairi vanosanganisira.
Zvakanaka, ivo vanoda kubva kuGNU neLinux kuti vavake "chimwe chinhu" vega, asi ivo vachiri kure kure kuzviita, saka ivo newe vanoita hupenzi hwekuzvidza nekuzvidza nharaunda inova ndiyo izvo zvinoita rinenge rese basa. Zvishoma pane kupfira kana kusvetukira kumhepo, inozopedzisira yava kuvarova.
Zvakanyatso kudikanwa here kuwanda uye kunyanyisa kungodzivirira kambani yakaratidza kakawanda kuti haina hanya newe?
Coment yemunhu angade kuona achishandisa windows, asati asiya linux yakaipa kwazvo, achitaura zvisina maturo zvakawanda mumitsara isingasviki gumi, zvinonyadzisa chokwadi ..., ndinotarisira kuti ari kungotsika-tsika kutsamwisa.
90% Ubuntu: Vanogadzira Debian, Mozilla Foundation, * buntu vanogadzira (kubuntu, xubuntu, lubuntu) uye vashandisi veUbuntu vanoda kuvandudza distro.
10% Ubuntu: Mark Shuttleworth, Cannonical uye vamwe.
"Kana rimwe zuva vatyairi vakashaikwa, zvinodaro nekuti nharaunda yako yakanaka haishande kana kuzviita nenzira isiri iyo" rudzii rwusina maturo irworwo?
Usanyora chinhu chekutanga chinouya mupfungwa, funga zvakanyanya.
Ndichakuridzira GNU / rwiyo rwevanhu vangu http://k42.kn3.net/taringa/9/9/6/1/7/6//pampelito/1F2.jpg
Pindura kuna Darko
Aya maRoma anopenga ... Izvi zvinondiyeuchidza nezve Hupenyu hwaBrian kubva kuMonty Python ...
-Iwe uri kubva kuYakakurumbira Jewish Front?
- Fuck iwe! Yakakurumbira Judaic Front? Isu tinobva kuFound Front yeJudhiya! Yakakurumbira Jewish Front ...? Zvinopesana!
- Iwo chete isu atinovenga kunyanyisa kupfuura vanhu veRoma ndivo mabharaki kubva pamberi peVanhu vechiJuda, vanopokana!
- uye Yakakurumbira Front yevaJudha Vanhu, vese vanopokana!
- uye Yakakurumbira Front yeJudhiya, vanopokana!
- Yakakurumbira Front yeJudhiya, vapikisi!
- Iyo Yakakurumbira Front yeJudhiya is isu ...
- eeeh, izvi, ndaifunga kuti taibva kuNew Union
- Yeiyo Yakakurumbira Front
- Chii chakaitika kune Popular Union, Rex?
- zviripo (zvinongedzera kune uyo agere ega uye kure)
Isa Ubuntu, Arch, Win $, nezvimwe panzvimbo pemazita emapoka uye ...
Ngatione kana isu tese tichirega kuva akadaro assholes.
jajjaajajajajajj Ini handina kurangarira iyo bhaisikopo, asi ichokwadi kuti inouya kune vhudzi reiyi xd
ROMANI ITE DOMUN!
HAHAHA. Wataura chokwadi!
Iyi posvo ine makomendi mangani? ... zvirinani uye zvakanyanya kushambadzira zveubuntu ndinofunga panogona kuvepo
Pindura kuna juan
Eya, nekuti munhu wese ane hanya ne "rusununguko", nekuda kwaMwari chirega kutaura zvisina maturo, Canonical irikuita izvo zvinotora kuti chigadzirwa ChaVO chibudirire, iri kuyedza kuunza Ubuntu kumaPC, mapiritsi uye nhare. Edza kuunza LINUX kune nyika yekunze. Kana ivo vakagadzira MIR, imo nekuti Xor anga asisakwanise zvavaitarisira uye vaifanirwa kuita chimwe chinhu kuchinja icho, kana pane imwe nguva kumwe kugovera kuchipera vatyairi, imhaka yekuti kugoverwa hakuna kuita izvo zvinodikanwa kune mamwe makambani kuzviona.
Mira zvisina maturo senge izvi, ndinofunga zviri pachena kuti Canonical haitsvage kukwikwidza kupokana nekugovera, kana zvisiri mamwe masisitimu anoshanda. Uye kana izvo zvichireva kuti software yakawanda, kukwikwidza kwakawanda, uye kutsigirwa kwakawanda, kwandiri, ngavachiite zvavanoda.
Ini ndoda kuona ubuntu pre-yakaiswa pamakomputa, mapiritsi, uye nhare.
Pakupedzisira njere diki. Ndakafarira chirevo chako.
Tarisa, ini handidziviriri munhu. Asi maonero angu ndeekuti pamwe Canonical iri kuronga kusimudzira zvirinani, haina kungo tarisa pane "kukuvara kwechibatiso" icho chinogona kukonzerwa nesarudzo dzayo. Kunyange zvakadaro, ndinotenda kuti estrus inogona kuunza hunyanzvi. Shanduko dzinorwadza, hongu, asi hapana anoziva ramangwana. Ini zvechokwadi ndinoona kuti Canonical inotarisa chete kune ramangwana, uye vazhinji vashandisi vanotarisa kune izvozvi.
Kana kupisa kutsamwa, mune ramangwana chete, tarisa panofurwa nemhepo uye tigoita sarudzo yedu yakanaka (enda kwatinokodzera).
Ndakamirira nguva yekundiratidza Zvichakadaro, ini ndinopfuurira naDebian. Uye ndinoziva kuti zvandichangobva kunyorera vamwe zvichaita kuti nzeve dzavo dzinzwe.
Pindura kuna Eria
isina kuvharwa akadaro
Yakanaka kune vanotanga uye semushandisi weFedora kurufu; Compiz; Xfce; Fluxbox uye Debian. Ini ndinofanira kutaura kuti dai Canonical yaive HR panguva iyo HR yakatanga, ingadai yakabhuroka kana yaive ikambani yeApple -style. Kutora zvakanakisa zveOpenSource neFreeWare kuti vazvitengese zvavo, nekuti ndizvo zviri Ubuntu, hapana chimwe kunze kwemapakeji mazhinji akashandurwa kubva kuDebian neRH zvakare kubva kuSUSE nekuda kwavo. Izvo hazvigadzi mabhesi kana izvo zvekutanga asi vanoisa pendi pairi uye zvimwe zvishongo izvo pakupedzisira hazvina kukosha kuita mutsauko. Mune mamwe mazwi Canonical ne yavo distro izvo zviri kuitwa nevamwe vane matama leecher kupota izvo zvakange zvatove kuitwa. Kubva pakutanga vashoma Apple vatevedzeri. Zvese izvo charade yehunyanzvi hwavo hweSL zvaive zvinopfuura chikamu chekushambadzira kuti kana iyo distro ndizvo zvavakagara vachipa kushambadza kwakanaka.
Pindura kune isina kuvharwa
waigona kuona kuti kuri kuuya ..
Haha, yakanaka sei posvo, uye yakanakidzei.
Ini handinyatso kuziva kuti dambudziko nderei. Ndiri kureva, ndakaona Ubuntu ichiberekwa, uye usambozvitora seprojekti inokufarira mune yemahara software. Handina kumbobvira ndaona kubvumidzwa kwechinyorwa cheichi, ini ndinogara ndichifunga nezvekutengesa. Kana ini ndikaratidza kusununguka nemamwe ma distros imhaka yekuda kwavo, ndinoreva kutengeserana. Mumakore ekutanga ebudiriro, mupiro kunharaunda waive unenge usipo, ivo vakangotora basa revamwe, rakakwenenzverwa, rakabatanidzwa ndokurishandisa kune iyo distro. Kusvika nhasi ini handifunge kuti pane chimwe chinhu icho Ubuntu chinoita uye Debian haigone kuita. Ingori pasuru yakanangana ne «Inotevera, inotevera Etc» uye zvinoita kunge zvakakura kwandiri, iri imwe nzira kune vanhu vasingade kutyora misoro yavo.
Kutendeseka, kana canonical ichida kupatsanura kana kupatsanuka kubva pasi rino zvinoita kwandiri kunge zvakanakisa. Sezvo ini ndaizopa muenzaniso kuti chigadzirwa chinobatsira chinogona kugadzirwa kubva kuGNU / Linux. Kune akawanda madhiri anozoramba achive. Ngatifungei kuti nekuda kweUbuntu isu tave neMint, iyo yandinofunga yakanakisa "Inotevera, Inotevera" dhizaini distros.
Nenzira yega. Ndanga ndichiyedza Linux kwenguva yakareba, uye chokwadi ndechekuti ini ndinoona kudzokera kumashure mune zvimwe zvinhu, kuti kurota kwangu kwaive kuti nemakumi gumi emakore vaizozviita kuti zviitike, asi kwete. Musoro uyu muenzaniso. Pasina kuenda kumberi panguva ino ndine laptop ine Intel HD mifananidzo uye zvinosemesa kubatanidza TV kuburikidza neHDMI, matambudziko nekugadzirisa, odhiyo, uye mune dzidziso isu tiri kutaura nezve yemahara mutyairi inogadzirwa neIntel.
Ini ndinofunga kuti nezvenyaya idzi Canonical inobata bhuru nenyanga, uye ndinozviona sedombo. Ini ndicharamba ndichiramba debian, nekuti ini ndinoifarira, asi pasina mubvunzo Ubuntu ichawedzera vamwe vashandisi vasingade kutyora dehenya ravo hehe.
Haa kutaura nezverusununguko. Vakadzima post yangu
Maitiro ekurodha pasi akateedzana uchishandisa flexget
Kanaima yekutanga Alfa 4 inowanikwa